Dulmar guud - gadaal
Psychosaurus waxay isbaraysaa:
Waxaan u maleynayaa gabayaa oo ma uusan noqon dhibanaha biofant. Fiyuusyadaas dhul-dhaafka ah waxay si sharci-darro ah uga safrayaan meel mugdi ah oo jirkooda dheeruna waxay nuugaan fikradaha dadka seegaya oo ka soo baxa maskaxda. Waan ka caga jiidayaa inaan isticmaalo ereyada kuwa kale ay horay afka ugu heleen. Waxaan u arkaa mid aan nadiif ahayn. Taasi waa sababta aan inta badan u abuuro ereyo cusub, taas oo abuureysa dhibaatada qofna mar dambe aniga ila fahmin. Natiija ahaan, waa inaan markale isticmaalaa ereyo ay ku qoran tahay luqadda Jarmalka ee luqadeedka ay u sameysay si aan toos ahayn. Luqadda way hadli kartaa maxaa yeelay waxay xambaarsantahay sawirada guud ee jiritaanka. Luuqadu badanaa waxay ku saabsantahay guri siinta sawirada aduunka. Waa wax laga naxo marka qofku raaco ereyada luqadda ka dibna u qaato iyaga oo ka fikiraya.Fikirka dhabta ahi wuxuu si firfircoon u qaabeeyaa luqadda. Luuqadu waa I of of Psychosaurus, waa xarunteeda. Adduunku runti wuxuu u yimaadaa nolosha adduun ahaan luuqad ahaan, maxaa yeelay ku hadlida macnaheedu waa: abuuridda adduunka. Bilowgii erayguu ahaa!
Mole: dheh Psychosaurus, muxuu buugani ku saabsan yahay
Psychosaurus: Buuggan dhexdiisa luuqaddu waxay ku hadashaa lafteeda iyo sidoo kale
Luuqadu waxay ka hadleysaa wax walba, buugani wuxuu leeyahay mowduuc kasta.
Duck: Aynu yeelanno su’aal shaqsi ah: Waa maxay farqiga u dhexeeya
cilmu-nafsiga iyo Carsten-ka?
Psychosaurus: Ma doonayo inaan ka hadlo taas, maaddada waa culeys
Duck: waa la soo bogsaday, odaygii!
Mole: Sida iska cad buugani waa mid
turjumaad toos ah!
Tani waxay kordhisaa wax-u-dhimista aan caadiga ahayn.
Afku wuxuu leeyahay in ka badan kun eray.
Kichermaus: Haddii aan doonayo inaan warqad u qoro Carsten, isaguna isagaa heystaa
internetka ama wax?
Psychosaurus: xilligan la joogo waxay leedahay cinwaanka emaylka
carsten-stemm@web.de isaguna sidoo kale wuxuu ku leeyahay internetka.
Werewolf: Sunt canaantin de această carte!
Giggle: Ma fahmin eray, xitaa xaruunta tareenka.
Rabe: Ma aha inaad wax walba fahamto. Mararka qaarkood way ku filan tahay in laga fogaado
in ereyada loo oggolaado inay ku maraan wax aan macquul ahayn.
Detlef double doid
Detlef Doppeldoid uma fikiridoono si sax ah labada qeyb ee maskaxda. Detlef wuxuu u maleynayaa inuu ka dhakhso badan yahay iftiinka, taas oo horseed u noqota barar waqti-dhaaf ah goos gooskiisa. Markaasuu midigtiisa bidix ku beddela, gudaha iyo dibaddaba, oo shabaggiisuu ku daboolaa. Isagu garan maayo inaad qolka galayso ama ka baxaysid. Waxay ku xun tahay Detlef Doppeldoid: maalin kale wuxuu u maleynayay inay dadku ahaayeen dad. Detlef sidoo kale ma xasuusan karto farqiga u dhexeeya Albert Einstein iyo Konrad Adenauer. Detlef wuxuu isweydiiyaa: '' isku mid '' iyo '' isku mid '' isku mid maahan? Mararka qaarkood Mr. Doppeldoid wuxuu sameeyaa khaladaad higaadinta lagesthenic. Haddii uu gebi ahaanba wareersan yahay, Detlef xitaa wuu xasuustaa mustaqbalka.
Detlef wuxuu leeyahay:
'Mar alla markii aanan aqoonin cidda aan ahay, waxaan fiiriyaa kaarka aqoonsiga: Waxaan ku leeyahay lambarkayga halkaas; tiro, dhammaan aniga naftayda, aniga ahaan. Waxyaabaha aan caadiga ahayn iyo kuwa aan caddayn. Gobolku wuu i jecel yahay. Laakiin taasi miyaa meelkasta igu helayaa? Kumaa ka dambeeyay magaca Detlef Doppeldoid? Oo muxuu yahay kaarka caagagga yar oo caynkaas ahi caddaynayaa Kaararka caagga ah way fududahay in la been abuuro. Waad been abuur kartaa maanta. Xitaa waad sameyn kartaa aqoonsi. Si xoogan ayaa aan uur yeelanayaa. ''
Bakayle hadli kara waxaa loo yaqaan bakaylaha hadlaya. Digaaggii hadalka hadlay ayaa wax cunaya intuu hadlayey oo hadlay intuu qaylinayay. Xididdada ereyga lama garanayo isaga. Haatan jacaylkiisa ayuu adeegsanayaa. Jacaylku waa eray uun isaga, munch, munch. Mid baa cuni kara jacaylka isagoon wax cunin, taasi waa xikmadda ah ka hadalka bakaylaha.
Shinbiraha way jiraan!
Bayoolajiga wuxuu xiiseynayaa baalasheeda shinbiraha, cilmiga cilmu-nafsiga wuxuu xiiseynayaa ahaanshaha shinbiraha. Yaa siiya shinbiraha? Jawaab: The 'It'. 'It' iyo siinta wax soo saar wax soo saar leh. Mid ka mid ah ayaa si kale uga jawaabi kara su'aasha sida soo socota: Evolution wuxuu ku siinayaa shimbiraha, ukunta duck wuxuu siiyaa shinbiraha, digaag duck wuxuu siiyaa shinbiraha, Ilaahna wuxuu siiyaa shinbiraha. Roob baa da'aya. Dhab ahaantii waa inuu dhaho: Daruura roob baa da'aya. Xitaa Ilaah tan iyo tan 'ma aha', maxaa yeelay wuxuu leeyahay: Waxaa jira Ilaah. Taas micnaheedu waa: '' 'wuu ka weyn yahay Ilaah. Gunaanad kale waxay noqon doontaa: '' '' waa kan dhabta ah ee Eebbe bixiyo. Shinbiraha ayaa jira. Ma tiraahdo: waxay qaadataa shinbiro. Bixinta ayaa ka sii barakeysan aqbalaadda. Bixinta ayaa laga yaabaa inay sidoo kale tahay mid nafsaani ah halkii lagu siin lahaa. The 'it'waa wax aan la fahmi karin oo ma sii arki kartid ceeryaanta. Natiijooyinka: Xitaa kama fekereysid halka shinbiraha ay dhab ahaantii ka yimaadeen. The 'it' waa khiyaano. Waxay iska dhigeysaa inay ogaato. Markaynaan ogayn in daruur roobaadka roobaysa, hadana 'roob' waa. Waxa kale oo diidmada ahi bixisaa 'it': '' Wax la mid ahi ma jiraan sida 'Elwetritsche!'Ma jiraan wax la mid ah sida Elwetritsche! '' Kumaa kan noqon kara 'kan' kaasoo awood u leh inuu siiyo kuwa aan ducks ahayn?Ma jiraan wax la mid ah sida Elwetritsche! '' Kumaa kan noqon kara 'kan' kaasoo awood u leh inuu siiyo kuwa aan ducks ahayn?
Goldmarie iyo Pechmarie
Maalin maalmaha ka mid ah waxaa jiray khudbad dhiirigelin leh oo leh laba gabdhood, oo labadoodaba lagu magacaabay Marie. Mid wuxuu ahaa nin hawl kar ah, kan kalena caajisiin. Maalin maalmaha ka mid ah shaqaaluhu waxay yimaadeen ceel oranaya:
'Biyo la cabbo ma jiraan!' '
Naagta harraadsan ayaa u maleyneysa inay u joogi karto sababo sharci mooyee. Gabadhu waxay ka cabtay biyaha si shil ah ayey ugu dhacday ceelkii, ka dibna wey miyir beeshay. Mararka qaar waxay mar kale ku toosday aag aan gebi ahaanba la aqoon.
Haweeney da 'weyn ayaa istaagtay daaqadda guri u baahan dayactir waxaana ay ruxday barkimadeeda. Frau Holle, oo ah magaca kireystaha, wuxuu gabadhii ku yiri: 'Daryeeleyaal tayo sare leh sida adiga oo kale waa dhif, maanta shaqo aad u badan ayaa ii taal. "
Muddo ka dib, si kastaba ha noqotee, gabadhii waxay noqotay mid guryo la’aan ah oo muujisay rabitaan ay ku laabato guriga. Frau Holle way siisay codsigan. Gabadhii odayga ahayd waxay ku hogaamisay gabadhii irrid ay rabtay inay gasho. Sida haweeneyda shaqeysa ay kadaba tagtay albaabka, waxaa ku soo degi jirtay dhanka korkeeda garoon faddarayn ah oo aan maqaarkiisa ka soo bixin. Gabadhii waxay tidhi: '' Fucking bullshit! Waxaan ka aargudan doonaa aargoosashada qadhaadhka. Waxaan bartaa xisaabta waxaan ku sameeyaa shahaadada shahaadada ee cilmiga 'paradox theories'.
Hooyadu markay aragtay inanteeda oo sagxad lagu tuuray, waxay u bixisay ilmaheeda Pechmarie. Sababo la xiriira sinaanta bulshada, hooyadeed waxay sidoo kale u dirtay gabadheeda caajiska ceelka. Ku dhawaad ​​wax la mid ah ayaa dhacay. Kaliya, halkii ay u aadi laheyd guriga Frau Holle, gabadheeda labaad waxay timid guri kale oo ay Frau Helle ku nooshahay.
Toban daqiiqo oo shaqo ah kadib, edbinta shaqada ee caajiska ah ayaa si xun hoos ugu dhacday. Ms. Jahannamo waxay tidhi, "Da 'da'daada, sidoo kale waan ahaa caajisiin. Xitaa ma haysto diblooma dugsiga sare ah. Waxaan hadda ku soconnaa Château Mouton-Rothschild 1945, kaas oo uu soddog wiilkiisu soddog u ahaa.
Nasiib wanaagse, qolka oo dhan ayaa ka buuxa. '' Ka dib toddobaad badan oo khamri la cabo, caajiska ayaa sidoo kale ku dhaygaga daran oo doonayey in guriga looga tago. Frau Hölle wuxuu ku hogaamiyay isla albaabkii Pechmarie ay soo martay. Gabadhii caajiska ahayd oo iridda dhex socota, ayay dahab ku daadin jirtay. Haatan gabadhu waxay ahayd mid aad u qiimo badan maxaa yeelay dahabkii lama saari karo. Markay guriga timid hooyadeed ayaa loogu yeedhay Goldmarie. Cadho darada awgeed cadaalad darada nolosha, hooyadu way ka tagtay kaniisadda waxayna gashay xukun cilmaani ah. Pechmarie markii dambe waxay noqotay borofisarkii ugu horreeyay ee macquul ahaanta wejigeeda dioxin ee wajigeeda. Noloshoodu gebi ahaanba way dhib badneyd. Si kastaba ha noqotee, Goldmarie waxay ku noolayd farxad iyo raynrayn illaa dhammaadka nolosheeda. > Dhamaad farxad leh
Adhijirka: Ii sheeg, buug noocee ah ayaad gacantaada ku hoos dhigtaa?
Wolfgang: Buugga waxaa i siiyay mid ka mid ah idihiina dhalashadeyda. Cinwaankeedu waa: Samee fardaha fardaha!
Adhijirka: Taasi waa kaftan?
Wolfgang: kaftanka lama doonayo in lagu khafiifiyo. Waligeey ma kaftamo Qof kasta oo kaftanka ku kacaana waa nin fulaynimo ah oo micnaheedu yahay ganacsi. Waligeey kaftan kamaan sameyn. Haddii qof uun qoslo, dameer baan afka kaga qaadaa.
Ido: Raalli iga ahaw haddii aan faragaliyo, laakiin hidda-wade ahaan ayaa wax laga beddelay, marka waan hadli karaa. Canshuur cusub ma ku jirtaa farmaajo idaha?
Ido kale: Aniguba sidoo kale waxaan ahay waxsoosaarka hiddo-wadaha ee Abuuraha, oo waxaan kuu sheegayaa: Raggu waa sida dumarka oo kale, oo waa sida kale ee hareeraha looga wareegaa.
Wolfgang: Waxaan had iyo jeer u maleyn jiray inay tahay sida kale ee hareeraha loo maro!
Adhijirka: Had iyo jeer waan ku wareersanaadaa wadahadallada caynkan oo kale ah. .. Ah, bal fiiri cidda soo socota! Isaga ayaa goosta!
Wolfgang: Kadib waxay noqon kartaa isbarbardhig!
Adhijirka: Waa maxay sababta?
Wolfgang: Sababtoo ah mid ayaa had iyo goor dhahaya: Isbarbar dhig kasta waa cufnaan!
ido la ruxay: Micnaheeda marwalba waa mid la hiigsan karo. Markaa af-hayuhu wuxuu si dhakhso leh isugu ballan qaadayaa khudbadiisa. Afka Jarmalka laba jibaaran waa Lapsus Freudianikus, soo bixitaan dhan walba oo aad u fiican oo is-bandhig ah.
Wolfgang: Waa maxay nooca hadalka?
Adhiye: Adhiga ayaa bartay. Psycholinguistics ama wax.
(Ninkii lugta ayaa hada gaadhay kooxda wadahadalka.)
Laydh: Way iga daba socdaan. Ganacsigaygii oo la xaday
Plutonium oo ka socota warshadaha quwada nukliyeerka ee Ruushka ayaa la afuufay!
Adhijirka: Waxba ha sameyn, Otto!
Idaha: Miyaad cuni kartaa plutonium?
Adhijirka: ido idil ma wada baran!
idihii oo dhami way wada joogaan: Mähhhh!
Otto: Waxaan heystaa hal wado oo kaliya oo ah: isdilitaan!
Wolfgang: Waxaan heli lahaa wado kale oo aan kaga baxo. Waxaan garanayaa saaxir wanaagsan oo ka socda aagga wareega. Wuxuu qabaa xasaasiyad, laakiin farsamo ahaan waa hagaagsan yahay.
Otto: Waa kuma saaxiriintan?
Wolfgang: Isaga waa waxkasta oo aad u maleynaysid inuu yahay, maxaa yeelay waxbadan buu leeyahay
Meerayaasha ku yaal guriga toddobaad, oo ay ku jiraan Pluto.
Otto: Ma aaminsani inay xiddigeega astrology!
Wolfgang: Laakiin xiddigaha ayaa kugu rumaysta!
Otto: Waa hagaag, waxaan rabaa in aan isku dayo, maxaa yeelay waxba iima haysto. Waxaan u oggolaaday in laygu riyaaqay bakayle oo aan magacayga gadaal u qoro si aan cidina i aqoonsan.
Adhijirka: Wax weyn! Hadda taasi waa dhammaad farxad leh!
Waqtiyada loo baahdo, tufaaxu wuxuu cunaa isteroberi.
Daanyeer: Galab wanaagsan, indhaha oblique, waxaad leedahay indhaha oblique.
Oblique-Indhaha: Oo waxaad tahay daanyeero, daanyeer.
Daanyeer: Halkan waxaan ku leeyahay usha firfircoonida dynamite.
Yaanu ku dhejinaynaa dameerahan?
Indhaha Oblique: Aniga dabcan! Kuma dhihi maayo TNT!
Daanyeer caqli badan, waad kasbatay abaalmarinta Nobel!
(Daanyeerku wuxuu dusha saaraa firfircoonida dameerka oo wuxuu damiyaa fiyuuska. Ka dib ilbidhiqsiyo dareemeysan oo sugitaan ah, waxaa jira qaraxyo rabshado leh: busta, qashinka iyo haraaga hilibka ayaa daboolaya goobta qaraxa.)
Daanyeer: Wanaagsan! Way burburtay!
Anaga noo ah xayawaan ma jiraan tiro iyo sadar.
Hadda mooska ayaa la cunaa marka hore. Haa!
Mar waxaa jiray gaari yar oo sixiq ah kaas oo ku dhex mara bulub iyo dabeecadda khafiifka ah. Gaarigii waa dhaqaaqaa, faras buu jiidayaa. Gaari aan maanta wadin. Markii gawaaridu bilaabeen in ay wadaan matoorka, gaadhigiisu wuxuu isu rogay birta, markii gawaarida wali la jiiday, ubax ayaa ubaxay oo biyihii ayaa la socday. Qarsoodigii nolosha wuxuu ku noolaa tuullada birta, halkaasoo giraangiraha biyuhu ku socdaan. Gaadhigu wuxuu ku dhashay gabadha birta. Samadu way fidsan tahay, cirku waa fidsan yahay, waa farxad. Stahltussi waxay ku soo dhacday cirka iyagoo wata canaan difaac. Waa Dagaalkii 1aad ee Adduunka, isku day aan micno lahayn oo birta lagu doonayo in mar labaad faras noqdo. Stahlbussi hadda waa faras lafteeda, waana sababtaas sababta ay u xirto fowdo. Fardo aad u qurux badansida xarrago oo aan hadda loo aqoon da'da birta. Caaggu sidoo kale waa bir. Wax kasta oo faraska lagu jiido waa bir. Waxaad ka baqaysaa qurux aan ahayn caruusadda dharka lagu qurxiyo.
Qol badan ayaa leh qol ka weyn banaanka. Kabadhka badan, tusaale ahaan, waxay u egyihiin armaajo caadi ah oo qolka jiifka ah. Laakiin haddii ay tahay inaad ku dhex dhuumato qolka kaydka haddii loo baahdo, waad la yaabi doontaa inaad ogaato inay galaxyo ku jiraan khaanadda oo dhan. Kuwanna maahan kuwo la isku halleyn karo oo ka dhashay oksijiin la'aan. Dunida waxaa ka buuxa godad dhab ah. Oo waxaa jira kuwo badan oo dheeraad ah.
Khatar ayaa kuu hanjabaya. Shilku wali ma uusan dilin. Laakiin mustaqbalka wuu ku dhici karaa; taasi waa halis. Noloshu waa amaan. Ma ogid inay nolosha sii xumaanayso daqiiqada soo socota. Khatarta ayaa kusii dhowaanaysa geeska, qatarta lama saadaalin karo, waxay u rogi kartaa riyo. Ugaarsaduhu waa khatar; Raasamaalka sidoo kale. Waa halis in fiilooyinka korantada la dhigo tuubbo biyo ah oo ay ka buuxaan. Guurka sidoo kale waa khatar. Caymiska nolosha, dhinaca kale, wuxuu ballan qaadayaa badbaadin: haddii aad naf weydo, waxaa laguu celin doonaa mid cusub. Laakiin iska jir khayaanada caymiska: Shirkadaha caymiska wax badan ayey ku khiyaameeyaan!
Kuwa safarka ku fikiraya dhul micno leh. Qaababka fikirku waxay u gudbaan duurka aqoonta. Wareeggiisa ayaa adkaynaysa fakarka oo aakhirka ku biiraa geedaha fikirka iyo baraf riyadiisa.
Fred wuxuu ilaah ku arkay Olympus taleefanka gacanta:
Fred: Salaam, Ilaahow!
Ilaa iyo goorma ayay ilaahyadu isticmaali jireen taleefanka gacantu?
Ilaahow: Haa, waad la qabsanaysaa. Waxaan sidoo kale kula xiriiri karaa telefon ahaan asxaabteyda, laakiin waxaan ilaahyo dooneynaa inay dadka naga dhigaan wax fahma.
Fred: Hagaag, maan helin!
Dalxiisayaasha maskaxdu waa bakaylaha xanaaqa xanaaqa. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa madaxa ukunta. Neerfektonikaagu ma aha mid aad u dabacsan, laakiin aad u dheer. Hilibka gogosha waa in lagu xoqaa madaxooda xiiqda, maadaama kuwani ay ku badan yihiin dufanka maskaxda. Neurolanten waa laamaha maskaxda. Neurolanten sidoo kale wuxuu noqon karaa jirridda geedaha oo qofku mar dambe arki karin kaynta dhirta oo dhan. Laakiin run ahaan neurolantes-ka ayaa ah jaranjarooyinka cunitaanka sushi ruuxiga ah.
Kuwa wareega maskaxda ayaa qaarkood loo yaqaanaa falsafad-yaqaanno. Falsafadda waxay moodeysaa iyadoo aan khamri la cabbin, waa iftiin la'aan. Cilmiga aqoonta, fikirku si xun ayuu u kaftami karaa. Cacti waligaa qosol. Fikradaha falsafada waxay u adag yihiin sidii jiis duug ah. Falsafadayaasha wadada loo maro bogsashada waxay bilaabeen inay qoraan gabayada.
Fred: Waad ogtahay waxa Detlef, waxaa laygu dallacsiyey inaan noqdo mid liita.
Fred: Waa yahay! Hadda waxaan ka heli karaa jawaabta su'aal kasta, haddii aan si uun sax ahayn, laakiin waxaan heli doonaa jawaabta.
Detlef: Kumaa kugu dallacsiiyay?
Fred: Maamulaha weyn!
Fred: Waxaan ahay dumigod. Wali ma dhinto, laakiin waan ka shaqeynayaa.
Detlef: Mm, samee intaas.
Fred: Tusaale ahaan, ugu dambeynti waan ogahay sababta muuska uu qalloocan yahay.
Detlef: Haa, sabab?
Fred: Waxay u rajeyneysaa midnimo, mooska wuxuu doonayaa inuu jannada ku laabto, waxay jeclaan laheyd inay noqoto goob wareeg ah, laakiin dhicitaanka ninku wuxuu ka mamnuucayaa inay sidaas sameyso, xooggeedu wuxuu gaaraa oo keliya ilaa meeshii la gaaro.
Detlef: Waa maxay demigod ogyahay!
Ereyga 'cirfiidka' 'waa erey cidla ah. Ereygu waa inuu sharxaa wax badan. Caqli galintu waxay gooysaa dhagxaanta; maskaxdu way iskuxirtaa. Ruuxu wuxuu u iftiimiyaa qaybaha adduunka sida qorraxda oo wuxuu siiyaa qaab. Maskaxda waa sawirka waxyaabaha. Ruuxdu waxay u labisaa walxaha yaryar ee leh waxyaabo intaa ka sii badan. Maskaxdu way fikiri kartaa, sirdoonka kaliya ayaa fikiri kara ama isku dari kara.
Sababta iyo saamaynta
Ciyaartoy bilis ah ayaa kubad kubad kubbada ku garaacda, taas oo iyana ku noqotay kubad kale. Fikirka sababa-iyo-saamayntaani waa maaddada aasaasiga ah ee sayniska. Musiibo ayaa samaysata oo keliya, waxna sharraxayso. Doonista xorta ah ee ciyaartooyda billiard gebi ahaanba waa qarsoon tahay aragtida adduunkan. Sababaha waa xayawaan caajis ah, oo ku dhawaad ​​dibi. Sababta ayaa lagu qanciyaa tamar, maahan micno.
Fred: Waxaan rumeysanahay macquul. Dhamaan cosmos-yada si macquul ah ayaa loo qaabeeyey. Si kastaba ha noqotee, haweenku qayb kama ahan cosmos-yada. Fikradda caqliga lihi waxay kuu oggolaaneysaa inaad gaarto walxo xujo ah. Kaliya waa inaad si adag uga shaqeysaa fakirka.
Arnold Heitermann: Logic nooguma sii kordho aqoonta. Tusaale: Waxaa jira sedex diiriye oo ku fadhiya xayndaabka. Dila shimbireed ayaa soo ag maraya oo duula mid ka mid ah shimbiraha.
Arnold: Immisa shimbirood oo wali ku fadhiya xayndaabka?
Fred: Weli waxaa jira laba tuke oo ku fadhiya xayndaabka.
Arnold: Khaldan! Wali waxaa fadhiya dad badan oo dayrka saaran!
Fred: Taasi waa gebi ahaanba caqli gal!
Arnold: Taasi waa macquul. Shimbirtii la toogtay ayaa dhulka ku dhacday. Dadkii Labaad ayaa argagaxay qaylada codka oo markiiba duulay. Dadkii saddexaad ayaa curyaamiyey baangiga waana shimbiraha kaliya ee fadhiyi kara.
Fred: Dacwadani waxay umuuqataa mid aniga sifiican loo dhisay, laakiin waa macquul.
Arnold: Hagaag, caqligu wuu sharxi karaa wax walba iyo waxba.
Fred: Gaar ahaan dhinaca dambe.
Arnold: Haa, had iyo jeer ka dib.
Xaqiiqda ayaa halkaa ka sii horreysay, si kastaba ha noqotee.
Fred: Ka dib markii la toogtay kadib si lama filaan ah shan nin oo fadhiyey xayndaabka?
Arnold: Markaa kadib labo nin oo is dil ah ayaa fadhiisan lahaa, iyagoo rajeynaya in sidoo kale la toogto.
Fred: Runtii waa wax weyn waxa caqligal ah.
Arnold: Waxaad wax kasta ugu macnayn kartaa caqli gal, xittaa cilmi ahaan.
Fred: Nin, nin, runtii waa inaan ka fikiraa arrintaas.
Arnold: Laakiin fadlan si caqligal u ilaali!
Fred: Ha ... haa ... si fiican ...
Socrates: maxaad u egtahay saaka, Plato!
Plato: Iska xir, adigu
Socrates: Si fudud uma lihid karti wadahadal!
Xabbad aad u daran ayaa nafteeda ku xanbaarsan.Waxaan jeclaan lahaa in ay dhasho haddii la gubay. Laakiin qofna ma shido. Kubaddu wali waa jillan tahay sidii dhoobada oo midna isma oga. Waa maxay sababta ay kubaduhu isu rogrogaan uun? Waxay ku duubaan wadada, laakiin wax kama beddelaan qaabkooda hawsha. Ugu dambeyntiina, waxaa rogaalcelin doona dhaqdhaqaaqa. Sphere ayaa wali ah Sphere. Hadda aniga ayay igu dhacday mar kale: rasaasta waa dumar!
(un) kaamil ah
Eygu laftiisu waa fikirka eeyaha. Fikradda eeygu ma waxay u egtahay wax aan duug ahayn, aargoosad dahab ah, adhiga, ama xaydh? Waan ognahay waxa goobada u eg. Waxaa jira hal goob oo keliya waana isku qumman yahay. Xitaa saddexagallaha way adkaanaysaa: xagal noocee ah ayay fikradda saddex xagal leedahay? Wareegga ayaa ah fikradda kaliya ee lagu sawiri karo saxda saxda. Eyga laftiisa lama sawiri karo, eey gaar ah oo keliya. Wareegtada lafteeda waa la sawiri karaa. Ma waxaan caabudaynaa goobada? Xitaa ma jirtaa “lafteeda”? Waxyaabaha kaliya ayaa iiga muuqda "aniga"? - Ruux kaamil ah run ahaantiisu nolosha way ku noqonkartaa. Noloshu waxay u baahan tahay gees gees goobeed ama god ka dhex jira afar gees. Kaamilku wuxuu u jiraa oo keliya fikrad ahaanmaxaa yeelay run ahaantii kaamilku ma jiri karo. Kaamilnimada nolosha wareegga wuxuu leeyahay geesood. Daloolku waa kubad laba jibbaaran. Waxay midho dhalays u tahay dhammaystir la’aan sida nolosha qumman. Xitaa sidaas oo ay tahay, xabadka ayaa si uun u jiran. Sababtan? Kaliya geedaha ayaa taas og!
Goobaabku ma neefsan karo. Meelna ma haysto god uu ku neefsado. Wareegga laftiisa ayaa loo arki karaa god. Wareeggu goob ma u yahay adduun kale? Dib uma fiirin karo sababta oo ah wareegga ma ii oggolaanayo inaan soo galo. Waa mid aad u qufulan. Waa inaadan ku khaldin ragga sidan oo kale ah. Wareegtada ilama hadlayo, had iyo jeer waxay noqon doontaa wax aan qarsoonayn. Wareegtadu waxay u badan tahay inaysan xitaa haysan wax ay qariyaan: waa wax aan macquul ahayn, caajis iyo madhan. - Wareeggu waa midabka goobada. Midabkani waa mid naadir ah oo aan magac lahayn. Sida ugu fudud ee loogu dhawaaqo midabka waa '' midab ''. Wareeggu wuxuu ku socon karaa adventures isagoon goobaabin ama xariiq lahayn. Ubadku waa nolosha lafteeda, maanta qof walbaa wuxuu u maleeyaa wax cusub. Laakiin wareega waa sidaas gabowdayin fekerkiisa cusubi waligiis ma soo saarikaro waalli. Si kastaba ha noqotee, philistines waligood ganacsiga kuma dhex dhacaan. Aad bay ugu kulushahay taas. Wareeggu wuxuu doonayey inuu noqdo goobaabin wuxuuna ka codsaday hay'adda shaqada inay dib u soo celiso. Karraaniga ayaa ahaa labajibbaarane. Waxay ku dhammaatay si xun.
Tufaaxu wuu fikiraa iyo midda tufaaxa.
Dilid waa cabsi
Hit waa falka ugu caansan adduunka oo dhan. Dilitaanku runtii waa mid cabsi badan. Hawshan ayaa durbaba si buuxda loo horumariyey xilligii Stone. Waad furi kartaa indhahaaga, waana buug sidoo kale. Fiiri qaamuuska, daaqadda burburi, ama wejiga qof ku dhufo. Fannaaniintu waxay ka dhawaaqaan durbaannada. Markaa dharbaaxada ayaa ku garaacaysa. Naadiga 1-aad ee kooxda FC ayaa garaacaya cagaha Rosenheim 2: 1. Ku alla kii garaacaa guuleystaa. Mid ayaa garaacista ugu fiican garaaci kara. Dhagax sharaf leh waxaa loo yaqaanaa dubbe. Ku garaacida lafteeda waa ceyriin iyo furfurnaan. Dharbaaxo waa miyir iyo atom. Dilaacinta jabka, burburka, garaaca kala go'ida. Ilmaha wax garaaca waxaa loo yaqaan goynta. Cunug xun. Ilmo kale oo garaacis ayaa loo yaqaan riixitaan. Cunugani waa mid ka badan oo shaqsiyan lehwaayo qorrax ka sii badan ayaa hore u socota. Hittu waxay sameysaa feedh, waxay siisaa waxa uu ku qabto caloosha.
Khasnadda shaqo waa keydin dhammaan waayo-aragnimada aadanaha ee ugu dambeeya. Waxaa jira waayo-aragnimo la xaqiijiyay in loo adkeeyay sidii kayd hanti oo kale. Sida goob magnetic, khasnadda shaqadu waxay u jeeddaa dhammaan uunka aragtida ruuxiga ah. Werkschatz waa Wikipedia dabiiciga ah ee nolosha. Nasiib darrose waxaa sidoo kale jira idaha madow oo ku jira meela badan oo cilmi ah: waxaa loo yaqaannaa Werkschmutz.
Marka loo eego King Orthos, xukunka wuxuu ka dhigan yahay in waxyaabaha loo habeeyo si ku saleysan waxyaabaha ay iyagu leeyihiin. Orthos uma wareejiso rabitaankeeda dadka. Boqorka ma doonayo inuu ku qasbo wax, laakiin taa bedelkeeda wuxuu baaraa sida ay u kala duwan yihiin wuxuuna u oggolaanayaa inay is abaabulaan. Dadka, riyaha iyo wixii kale ee jira waxay ku nool yihiin boqortooyada Ortho, qof walbaa wuxuu istaagaa oo ku socdaa meeshiisii ​​saxda ahayd. Dhimashadiisa ka dib, King Orthos wuxuu ku milmi doonaa biyaha wabiga uu jecel yahay, kaasoo ugu dambeyn ku shubaa badda. Badda dhexdeeda, wejigiisa khasnaddiisa ayaa sii wadi doonta hanuuninta dadka.
gaajo iyo harraad
Gaajadu had iyo jeer waxay rabtaa inay wax cunaan. Gaajadu gebi ahaanba waxay kuxiran tahay ujeeddada. Laakiin taasi waa sida saxda ah ee gaajada u soo jiidata. Wuxuu si buuxda uga go'an yahay nolosha, qaarna xitaa waxay sheegaan inuu isagu naftiisa yahay. Laakiin waxaa loogu talagalay oo keliya ragga waalan.
Baahida ayaa ah ka fogaanta gaajada iyo harraadka. Baahida ayaa liidata oo baahi ayaa leh. Baahidu waa mid adduunyo mar walbana u eg mid cawlan. Baahiyaha waxaa lagu keydin karaa heerkul kasta. Ubaahan tahay waligeedna ma shaqeynayso, marwalba way jiifsataa. Ku alla kii wax u baahan ayaa wax ka iibsada.
Ayaa U Baahan Fibber-ka Cuntada? Gaar ahaan markay kaliya ka kooban yihiin balastar. Soo buuxiyeyaasha buuxiyeyaasha. Waxay buuxinayaan booska, laakiin waxay ahaanayaan naftooda kuwo is waaran. Waa nuxurka iftiiminaya.
Psychosaurus gabi ahaanba waa dhamaadka:
Awood baraf sida dhererkeeda kor u qaadday gacanteeda. Biyo biyo ah ayaa ka soo dhacaya wejiga qabow. Indhaha dumarka hadhka ayaa u iftiimaya sida labo sun oo habeen ah. Laakiin ma ahan muddo dheer. Nalalkaaga hadda waa dansan yihiin. Haweeneydii hadhku waxay u duushay cirka sidii malag madow. Meesha aan la aqoon ayaa agoon ah. Meel aan cidina weligeed joogin, ma jirto cid hadda ama midkoodna. Aqoonta aan u leeyahay inaanan ahayn waxay ku xigtaa meesha bannaan. Waxaan ahay diirimaad, laakiin sida kuleylka oo keliya, maxaa yeelay ma haysto jir kale. Oohin la'aan carrab la goesaan ayaa ku dhacda meel banaan. Meelkasta waxaa jira faaruqnimo meesha ay wax uun dhab ahaan jireen. Meel aan wax ka jirin, waxba ma arki kartid, gaar ahaan haddii aadan indhaha lahayn. Laakiin waxaan arkaa argagaxa mana garanayo sababta.
Dalool waxaa loola jeedaa yarayn la'aan wareegsan. Guryahu waa faaruq. Daloolku had iyo jeer waa marin marin gala oo gala. Mararka qaar aragtidu waxay ka baxdaa godka aragtidiina waxay ka soo baxdaa godka. Dhulalku way gaajoonayaan, waxay jeclaan lahaayeen in la buuxiyo. Rabitaanka dadka oo dhami waa in lagu qanco. Runtiina godad baa jira. Kuwani waa wax hufan oo qofna arki karayn, xitaa ma aha fisikiste qalabkiisa weyn. Dhar la’aan ayaa lagu arki karaa dadka qaawan. Maqnaanshaha caqabadda, dhinaca kale, ayaa wali gaajoonaya oo aan la arki karin. Dusha sare waxay u egtahay inay maran tahay. Hadday firaaqan buuxsantay, dusha ayaa si dhakhso leh u baaba'aysa, waxay noqotaa mid dhuuban. The esthete wuxuu qoraa midab dusha sare si markaas ay u noqoto isku kalsooni badan.
Xayawaanka caadiga ahi wuxuu leeyahay afar lugood, waa “meows” ama wey burqataa. Fikradda xayawaanku waa nooc nooc eray ah oo loogu talagalay noolaha badan oo wax yar wadaaga. Xayawaanku ma laha caleemo, mana sameyn karaan bambaanooyin sun atom ah. Xayawaanku waa dad gadaal u socda. Si kastaba ha noqotee: maalin maalmaha ka mid ah xayawaanku way fahmi doonaan aragtida Gödel. - Laakiin waa goorma?
Dabeecadu waxay noqon kartaa mid cayriin oo aan kala go 'lahayn. Waxa kale oo jira dabeecada riyooyinka: dabeecaddani waa jannada dadka xitaa kahor intaan dadku dhicin. Dabeecada Charles Darwin ee Jarmalka wuxuu umuuqdaa sidan: dagaal adag oo looga soo horjeedo xitaa ka sii xoog badan. Dabeecaddeena labaad waa dhaqan. Dawladeena seddexaad waxaa loo yaqaan artificiality. Qofna ma jecla inuu ku noolaado halkaas.
Ubax baraf ah
Awood shisheeye oo ka timid Sweden ayaa laga sameeyay baraf qabow. Awooddan ayaa dhulka ku sii dhacda qaab gabar gaboobay oo la yiraahdo Eisblume. Ubax laga sameeyay baraf, ubax qurux badan. Ubaxku waa xasuus guga sababta oo ah waa xilliga ubaxyada cusub ay badanaa ubax baxaan diirimaadka dhalinyarada. Ubax baraf leh, si kastaba ha ahaatee, waxay ubax ku dishaa qabowga dilaaga ah ee xilliga qaboobaha. Dhamaan dadka kale ee waliba laga sameeyay baraf, waxaa kaxeeya ubaxa barafka. Agnis sidoo kale waxaa laga sameeyaa qabow, waxay ka samaysan tahay baraf gubanaya. Agnis wuxuu arkaa Eisblume oo xamaasad leh. Maraakiibtu had iyo jeer waa kuwa ugu kulul. Iibiye iibiyaha jalaatada, Mr. Sumpfstein waa mid layaab leh. Kubbadiisa uu barafku leeyahay waxay leeyihiin waxyaabo qarxa oo gubanaya markii uu buuraha dhaadheer dheer yahay. Eisblume waxay aragtay Mr. Sumpfstein: Way argagaxday,Kubadda qoob-ka-ciyaarka ah ayaa madaxdeeda ku duuban. Qofna ma oga inuu kubbaddu ku joogsan doonto qolka toban iyo toban. Agnis wuxuu noqon doonaa seddexda. Kubbadaha barafka ama kubadaha-biraha, kubadaha dhammaantood waa isku mid. Bulletinadu waa baanka xun ee masiirka. Hadana waxaan burburinay bangigan waxaanan xoreynaynaa waallida. Qof walba gebi ahaanba waalaa: Eisblume, Agnis iyo Mr. Sumpfstein waxay ku wada jiraan hal sanduuq. Waad ku neefsatay: Waar, taasi waa wanaagsan tahay. Ugu dambeyntii waa bilaash!Agnis iyo Mr. Sumpfstein waxay ku wada jiraan sanduuq. Waad ku neefsatay: Waar, taasi waa wanaagsan tahay. Ugu dambeyntii waa bilaash!Agnis iyo Mr. Sumpfstein waxay ku wada jiraan sanduuq. Waad ku neefsatay: Waar, taasi waa wanaagsan tahay. Ugu dambeyntii waa bilaash!
Dhiiggu wuxuu usocdaa diirimaad xoog badan iyo xoog badan. Dhiiga bini aadamka waa mid shaqsi ahaaneed ilaa iyo inta uu wali wareegayaan xididadiisa. Wareegyada dhiiga, marka waa wareega. Dhiiggu wuxuu xoojiyaa goobaabintiisa. Dhiiga dibedda ee qabowga iyo siliinge caafimaad aan wadnaha lahayn ayaa durba dhintay. Kaliyuhu wuxuu leeyahay hawo qabow. Ilaa qorraxdu ka soo baxdo dhogorta cagaarka ah ee cawlaha. Vampire kasta wuxuu ogyahay in markii dayaxu soo ifbaxo, uu dhiiggu madow yahay. Maalintii waxba ma arki kartid.
Dabka wuxuu ku cayaaraa olol daran. Gubashada duurjoogta ah waxay baabi'isaa cimri dhererka shidaalka. Qulqulaya kuleylka ayaa galaya qolka, ilkaha qandhona way is qaniinayaan Awoodda duufaanta cas waxay ku wareejinaysaa agagaarkeeda kuleylka diiran. Xuubabka dabka ayaa u dhinta dambas. Dabka waa mid cajiib ah, laakiin walaxdiisu waxay ka qaadataa shidaalka. Cunnadiisa waxaa loo cunaa si ka dhakhso badan sida loo kariyey, si dhakhso badan. Diirimaadka dabku si tartiib ah ayuu ugu seexdaa meeraha dhimanaya. Markay kuleylku waalanaado, waxay isu beddelaysaa kuleyl.
Guud ahaan waxay muujinaysaa sida ugu badan ee wejiga loogu baahan yahay. Waxyaabaha gaarka ah waxay muujinayaan cidhifyo badan oo cad. Guud ahaan waa isku mid meelkasta; waxaa badanaaba loogu muujiyaa si la mid ah. Muuqaalka wax kasta, guud ahaan waxaa laga heli karaa meel kasta. Adeerkii cawlan ee guud waxaa loo yaqaan dhexdhexaad. Guud ahaan waa inuu la qabsadaa kuwa gaarka ah, taas oo abuureysa buufis. Generalku wuxuu siiyaa nabadgelyo markaad fasax u baxdo aqoon aadan aqoon.
Hadhka taagan had iyo jeer waa inuu taagnaadaa, inkasta oo uu aadi karo meeshuu doono. Haddii hadhka taagan uu doonayo inuu guuro, bey'addu way ka gudubtaa halkii ay isaga ka ahayd, isaga laftiisa ayaa joogsada. Marka hooska taagan wuu dhaqaaqi karaa welina waa inuu weligiis isla meesha joogo weligiis. Hadhka taagan ma leh shirkad. Dabcan waxaa jira hoosyaal kale oo taagan, laakiin waa meel kale.
Jidku wuxuu horseed u yahay himilada illaa inta aanu ciiryaarradu ku dul socon. Wareeg gaaban ayaa gaabinaysa jidka nolosha. Si dhakhso ah ayuu isagu ku socdaa jid aan jirin. Sidaas darteed, wuxuu waayo-aragnimo u leeyahay. Guushiisa waa mid kulul oo faaruq ah oo aan hilib lahayn, laakiin wareegga gaaban wuxuu leeyahay saameyn charismat. Wadada ugu gaaban had iyo jeer waa wareeg gaaban, yoolkiisana waxaa lagu magacaabaa macno darro. Hawlaha wareegga gaaban ee aan koritaanka lahayn, waxay ku socdaan wado la'aan. Joachim Ernst Berendt wuxuu qoray buug: '' Jid majirto, socod kaliya ayaa ah: JOOJI dabiiciga ''. Waxaa lagu waday gaari lagu wado soo bandhigida buugiisa.
Waxaad ka baqi doontaa in socodku ku soo dhaco. Laakiin socodka ayaa leh saameyn weyn: had iyo jeer waxay ku jirtaa isku dheelitirnaan. Istaaggu wuxuu dhaqaajiyaa wadada. Si kastaba ha noqotee, jiifsadku waligeed ma shaqeynayso.
Buuraha la tilmaamay ma leh wax dhibaatooyin ah oo waxay ku faraxsan yihiin inay bateen oo ay aad u weyn yihiin. Samadu sidoo kale waa ku faraxsan tahay markii buuruhu soo booqdaan. Cirka weyn sidoo kale wuxuu u baahan yahay aaminaad.
Sababta waa hoosta. Waa aasaaska, sagxada, salka iyo aasaaska. Haddii aad hoos u eegto xagga hoose, ka dibna wuxuu noqonayaa ceelka. Halkaas kuma arki kartid cufnaanta. Hoose iyo yaamaysku waxay dejinayaan dareemayaasha si aad u wanaagsan. Waxqabadka ugu wanaagsan ee aadamuhu waa in la helo waxyaabaha ugu hooseeya. Kaliya bakaylaha cabsida leh waxay door bidaan inay sameeyaan wax faa'iido leh, maxaa yeelay faa iidada dunidu way baaba'aysaa.
Dunida hoostiisa ku hoos taal adduunka. Waxay u dhowdahay inaysan ka mid noqon adduunka, ma garan kartid, taasina waa sababta aadan ugu dareemaynin guriga. Kuwii dhintayna waxay ku hoos jiifsadaan dhulka; Sidee kale dhirta oo dhan u kori doonaan?
Daruurtu waa ido jannada ku jirta. Daruuro had iyo jeer waa murugo. Had iyo jeer way ooyaan. Laakiin sidoo kale waxay ka ilaashadaan lo'da cadceedda gardarada leh. Daruur ayaa soo daadisa wanaagga iyo xumaanta dadka. Qaababkooda ayaad uga sheegi kartaa waxa saacaddu timid. Dhaqdhaqaaq iyo biyo ayaa ku wada cayaaraya daruuraha.
Ha ku shubin wasaqda saladhka. Haddii kale cudurku hanjaba! Wasakhku waa jidhka u dhigma dembiga. Nabarka waxaa loo arki karaa inuu faddaro, maxaa yeelay boogta badanaa waxay sameysaa qolof aad u xun oo qarka u eg oo wasaq ah. Wasakhaynta ama wasakhda, ayaa iyana, tilmaamaysa dambi. Qof waa la caayay. Ma waxaa na dhaawacay maxaa yeelay annagu waxaan nahay kuwo aad u qumman? Mise waxaan nahay kuwa aan liicneyn sababtoo ah waan dhaawacnay? Mise dambiile ma inaan ku xadgudbay wax, sharci ama qof? Laakiin waxba kuma dhaawacno! Waxaan nahay dad qumman oo aan dambi lahayn! Qof kasta oo sheegta waxa noocaas ah waa mid waxyeello leh sidaa darteedna waa dambiile yahay.
Galmo xabsi ah
Darbiyada xabsigu waxay samaysanayaan qalbi. Darbiyadeeda bannaanka waa kuwa madow oo dibedda ku yaal casaan gudaha ah. Maxbuuska Rasputin ma aha kan ugu yar, laakiin sidoo kale maaha kan ugu da'da weyn, maxaa yeelay isagu wuxuu weli leeyahay finanka. Jarmalka sidoo kale waa la xidhay: Rasputin iyo Jarmalku sariirta ayey wada jiiftaan. Rasputin waxay ka cabsi qabtaa in Jarmalka ay ku dhici doonto waraabowga. Jarmalka wuxuu ka tagay Rasputin. Waxay u badan tahay inay kaliya qabato Pippi, laakiin ma sii fogeyn doonto, maxaa yeelay waxaan ku jirnaa xabsiga wadnaha. Xabsi waa dhisme aan la baxsan kareyn. Rasputin wuxuu hor taagan yahay muraayadda horteeda wuxuuna muujiyaa nabarradiisa. Bakeygu wuxuu ku fidaa daaqsinka qalinka: Si kasto waa u karaahiyo, ey.
Rat iyo bamamka atomka
Jiirka waa jiirka ka soo baxay megalomaniac. Waxay u dulqaadanayaan shucaaca shucaaca ugu wanaagsan ee dhammaan waxyaabaha nool. Sida xaqiiqada ah maalin maalmaha ka mid waxay noqon doonaan boqorrada dhulka. Jiirku midba midka kale wuu dilaa, way aad iskugu mid yihiin aadanaha. Qiimee yaa awood kara! Si kastaba ha noqotee, jiirku wuu ka caqli badan yahay aadanaha maxaa yeelay waxay dhaqso u bartaan inayan cunin cuntada sunta ah markay ogaadaan in dadkooda gaarka ahi u dhintaan. Taasi waa sababta sunta jiirka aysan u ahayn xalka joogtada ah ee baabi'inta unugyadan dhalmada leh. Qarniyadii Dhexe dadku waxay silcin jireen jiirka, maanta jiirka waxaa lagu silciyaa sheybaarka sayniska. Tani waa guul u soo hoyatay aadanaha! Dhibanaha ilaa dhibanaha! Macbudka Karni Mata ee Indian, jiirka cute waa la jecel yahay waana la daryeelaa. Galbeedka, si kastaba ha noqotee, waxaa jira kaliya jiirka bulaacadaha wasakhda leh.Shiinaha waxaa jira xitaa jiirka oo ah calaamad zodiac. Laakiin cilmu-nafsiga '' psychotic asecho Psychosaurus '' ayaa yidhi: "Kuma sii noolaan karno qarniyadii dhexe! Iska fogee sidayaasha xariifka ah ee cudurka! Maxay siyaasiyiintu wax u qaban waayaan? Weligood waxba ma qabtaan! "
Kama taaban kartid taabashada maxaa yeelay aad bay uga fogtahay safka ay ka ciyaarayaan. Haddii aan waxba la taaban, markaa waxaa jira waxyaabo. Xariiq ayaa ka socota halkan ilaa halkaas. Waa iska caadi in ay ku dareensiiso niyad jab. Saynisyahano iyo naqshadeeyeyaal sida xariiqyada. Khadku nolosha ma cuno. Khadku wuxuu aruuriyaa nolosha oo wuxuu ka helaa tamar si ay awood uguheyn karto kuleylka qolka illaa 20 digrii dhexdhexaad ah.
Jidadku waa isku shaandhayn oo loo eegayo caanka loo yaqaan 'jaangooyada' Fikirka noocan oo kale ahi maahan sabab la'aan, laakiin wuxuu u dhigmaa jacaylka u janjeedha.
Wanaaggu waa geed midho dhala sanadka oo dhan. Alwaaxdiisu waa dhiig adag; Caleemihiisu way qosli karaan. Midabku wuu wanaagsan yahay, cawlanuna way xunyihiin. Shayddaanku wuxuu cunaa kuwa wanaagsan. Wanaaggu wuxuu ka koobnaan karaa laftiisa. Laakiinse sharku wuxuu ku xidhan yahay halaagga wanaagsan. Sidaa darteed, shar weligiis kama guuleysan karo.
Cusbada waxay ka kooban tahay sodium iyo koloriin. Istaaggu wuxuu ku taagan yahay labadiisa cagood, laakiin jiritaanku wuxuu ubaahanyahay walax aasaaska u ah. Jiritaanka jiritaanka wuxuu ubaahanyahay qeybo ay ka koobantahay, kaligiis ma noqon karo. Coarsest ayaa jira. Ereyga “saamiyada” wuxuu aad ugu dhawaa dhowyahay maaddada.
Mouse iyo baytar
Jiirarku waxay leeyihiin afar lugood waxayna socodsiiyaan si waafaqsan amarka Eebbe. Si kastaba ha noqotee, jiirarka qaar ayaa illowsiiyey mustaqbalkooda wayna afuufeen. Maalintii oo dhami waxay laalaadaan jilba joog (kor) (fiidkii) oo habeenkiina waa lakalayaa (dhiig cabista iyo alaabada). Jiirka sida baatariga waa indha la '. Taasi waa ciqaabta Eebbe dembiyadooda. Xalka degdega ah, jiirka duulaya ayaa hada ah inay dhagahooda ku arkaan. Taasi waa mid cabsi badan.
Haweenka jilicsan ayaa si dhakhso leh u fadhiista meesha loo yaqaan 'anorexia'. Lagu eedeeyay flabby iyo dufanka xasaasiga ah. Haddii khafiifku doonayo inuu culeys kordhiyo, markaa waa in loogu yeedhaa "caato". Dhuuban mararka qaarkood waxay leedahay saameyn aad u xoog badan marka loo eego qaro weyn, sababta oo ah waxay ku hagi kartaa nuxurka badan ee caloosheeda macaan. Sidaa darteed, dhuuban ayaa badanaa ka caqli badan kan qaro weyn. Tani ma khusayso qulqulatooyinka khafiifka ah ee loo yaqaan 'board board', sababtoo ah waxay leeyihiin guddi qaro weyn madaxa hortiisa.
Magacaygu waa Schmidt waana dhintay, waxaan qabay nolol dembi leh. Goobtaydii shaqada ee Shaydaanka & Sons, madaxdeyda hunguri-weynaha wuxuu isu rogay 100 euro biil. Waxaan dareemay fursaddayda noloshayda farxadda leh geerida ka dib: Si dhakhso ah ayaan biilka ugu galiyay boorsadayda oo waxaan ku sawiray maqaar dusha sare. Amiirkeygu wuu xannibay. Kaliya ka dib hubintiisii ​​ah inaanan gelayn doonin cadaabta dhimashadayda kadib ayaan mar kale iskutallaabta ka saaray. Muddo yar ka dib waxaan si lama filaan ah ugu ruxay diil muus ah oo horteeda AOK ah, waxaana ku dhacay madaxa gadaasheeda madaxayga waddada adag. Waxaan u dhintay si dhaqso leh, sida loo ballan qaaday, cadaabta ma aadin, laakiin iyagu ma aysan dooneynin inaan jannada geli karo sababtuna waa inaan shar ka adkaaday,laakiin weli wax fiican kama aysan qaban. Hadda si joogto ah ayaan uga warwareegayaa inta u dhexeysa jannada iyo cadaabta oo hadda ma ogi waxa la sameeyo.
Fred: Dhibaatadu gebi ahaanba looma baahna. Doomaha runta ah ee dunida abuuray?
Detlef: silica ayaa ka ilaaliya falalka nacasiga ah. Waxay kaa hortagaysaa inaad cabto khamri badan. Xumaan ayaa kuu horseedda wanaag.
Fred: Ma jiraa wado kale? Nooca jacaylka?
Pope: Ilaah waa mid aan macquul ahayn (aniga oo kale ah), durba wuu ogaan doonaa sababta uu adduunka sidan u u abuuray.
Mephisto: Anigu waxaan ahay qayb ka mid ah xooggaas oo had iyo jeer doonaya xumaanta oo had iyo jeer wanaag u abuura.
Bert Hellinger: Heer sare, sharku sidoo kale waa wanaagsan yahay.
Fred: Dhulka ayaan ku noolahay; Dhulku waa hoose, heerka sarena waxba ii tari maayo. Midkoodna midkoodna ma ahan mid qancin kara.
Detlef: ilaah qorraxdu sidoo kale way dhibaatootay. Wuxuu u dhintay nin iskutallaabta dusheeda, wuuna soo sara kacay maalintii saddexaad.
Fred: Taasi waa midnimada isaga. Waxaan dareemayaa sidii hore si ka wanaagsan sidii hore.
Ilaah waa ka weyn yahay ... Ilaah had iyo jeer waa ka weyn yahay qof fikir karaa. Si aan u noqdo dhinac aamin ah, ma doonayo inaan qoro wax xun oo ku saabsan Ilaah, waligaa ma ogaan kartid. Illaa Eebbe Ibliis mooyee. Ma sharbaa ilaahyada dhabta ah? Mise jiritaankooda ayaa quudiya cunista waxa wanaagsan? Haddii uu jiro hal Ilaah oo keliya, qof ayaa runtii u wici kara oo keliya Allah. Labada dhex-dhexaad iyo dhammaan-A-dhawaaqa A-dhawaaqyadu waxay muujinayaan dhawaqa L-aan dhammaadka lahayn. Haddii ay jiraan ilaahyo dhowr ah, markaa waxay noqotaa midab badan oo jacayl leh sidoo kale dadka waa u fahmi karaa. Ilaah kasta oo ka mid ah ilaahyada kale wuxuu leeyahay mas'uuliyad u gaar ah. Allah hada uma baahna inuu yeesho 99 magac, waayo waxaa jira 99 ilaah. Oo ilaahyada boqolka ayaa laga yaabaa inay dib u midoobaan ilaahyada oo dhan, sidaa darteed waa la qaatay.Kala qaybsanaanta fanaaniinta ee wanaagga iyo xumaanta waxay ku milmaan tirada ilaahyada badan. Mararka qaarkood ilaahyada waxaa sidoo kale loo yaqaanaa malaa'igo, malaa'igo ama malaa'igo sarreeya.
Garlic waa midab cusub oo jilicsan. Lugaha waa la kala qaaday. Kala qaybsanaanta dhabta ah ee shakhsiyadda ayaa xididdadeeda leh. Dibadda, si kastaba ha noqotee, basasha waxay muujineysaa isku xirnaan. Garlic wuxuu ka caawiyaa ka hortagga vampires iyo saaxirrada. Tiibaydu waxay xoojisaa dhiigga waxayna ka dhigeysaa mid u daciif ah u-dul-noolayaasha oo xitaa vampires-ka ay lumayaan rabitaankooda. Cilmiga 'schizophrenic leek' wuxuu kaloo dilaa ku dul-noolaashaha jirka, sida go'yaal iyo bakteeriyada tabarta daran. Garlic wuxuu u qaybiyaa aadanaha sida qiiqa sigaarka. Qaarkood waa jecel yihiin: kuwanu waa dadka wanaagsan. Dadkii xumaa (tusaale ahaan, vampires, saaxiriinta, naasiga, caruusadaha caruurta, maal qabeenada iyo codbixiyaasha Greens) waxay dareemayaan inay urayaan urkooda.
La gal Ibliiska
Qofku si dhakhso leh ayuu u noqon karaa midka quruxda badan iyo taajirkaba isagoo heshiis yar la gala xafiiska adeegga Shaydaanka & Wiilasha: Qandaraaslaha (Ibliis) wuxuu fuliyaa hamigiisa adduunka. Yeelkeede, qandaraasluhu wuxuu naftiisa u huray geerida ka dambaysa cibaadadayaasha jahannamada ujeeddooyin cilmi-baaris ah. Qandaraasku wuxuu sharci ahaan ku ansaxayaa dhibic dhiig oo ka socota qandaraaslaha.
Arnold wuxuu khiyaameeyay cudur ku dhaca dhulka oo dilaa dadka xun oo dhan. Kuwa wanaagsani ma bukoodaan marka ugu horreysa ama si fudud ugama badbaadaan cudurka. Arnold dabcan waa mid ka mid ah ragga wanaagsan. In kasta oo uu sidaa ku hubsan karo? Ka waran haddii cudurka daacuunka runtii kaliya dilo dadka wanaagsan? Taasi micnaheedu waa, laakiin waa iska caadi cadaalad darida adduun. Arnold wuu baqayaa wuxuuna doonayaa in laga tallaalo qaddarka, in kasta oo uu ogyahay inaysan taasi suurta gal ahayn.
in la gooyo
Miyir-beelku wuxuu gooyaa waxyaabaha. Jarida ayaa ka qurux badan taariqda, taasina waa sababta kaneecada aysan u lahayn cinwaan caan ah. Nafo adag waxay leeyihiin himilooyin ay ku dhiirrigeliyaan, fulaynimadu guryahoodu kumalaha wax finaan. Waa inaadan gooynin fartaada! Marka dadka waaweyni: iska jir taxadar! Midabka googoynta waxaa loo yaqaannaa afdhaaf. Basbaaska kulul iyo bambooyinka galmada sidoo kale waxay noqon karaan xoogaa jilicsan mararka qaarkood.
Hubku wuu fidiyey. Gacmaha gacmuhu waxay bilaabeen inay ubaxaan. Hubku gacmahooda ku nadiifiyaan, gacmahana lagu xoojiyo aaladda. Laamaha waa gacmaha geedaha.
Xuduudu midba midka kale ayuu uga go'aa. Waxay ka bilaabataa ama joogsataa xadka. Xudduuddu waxay sameyneysaa markab noolaa. Dhiiggu wuxuu u baahan yahay xididdada si ay ugu noolaadaan. Guri wuxuu xaddidayaa ku noolaanshaha darbigiisa. Markay noloshu ka guurto gurigeeda, waxay ku dhex daadataa badda guri la’aanta.
Saxanka wuxuu leeyahay wareeg Marka la barbardhigo jirku, geesku wuxuu dhammaystirayaa ciriiriga milkiilaha. Jirku waa qurxin, waa qasab in la joojiyo fiditaanka.
Ereyga “adduun” wuxuu sharxayaa muuqaalka muuqaalka dhulka. Adduunku waa loo fahmi karaa inuu yahay dil dilaa ah. Adduunyadani ma laha dhamaadka. Aragga bini-aadamku wax taageero ah kama helo jidadka aan dhammaadka lahayn. Adduun aamin ah wuxuu ku xiran yahay geeskiisa. Halkaas oo adduun aaminka ahi ku xidhan yahay xaddidnaan la'aanta hubka gacmaha.
dhalaalaya oo mugdi ah
Gustav waa indhoole labada indhood. Cagihiisa waxba ma arki karaan. Taasi waa wax fiican, maxaa yeelay haddii aadan wax arkin, ma murugoonaysid sidoo kale. Sidaa darteed Gustav waa faraxsan yahay. Waxaa jira dad leh taariikh indhoole. Adiga oo aad u indha la 'oo aad ka gudbi karto. Fiyeyaashu sidoo kale way arkaan madow, laakiin wax bay maqlaan si iftiin leh. Mugdigu miyuu arkaa iftiinka?
naag dayaxa ah
Dayaxu wuxuu ku qoslaa gudcurka. Waa la arki karaa isagoo buuxa. Sida dayaxa oo buuxa waa lab. Haddii kale iyadu waa dheddig. Mise si kale ayay ahayd? Dayax madoobaadku wuxuu cabsi ku qabaa guud ahaan cirka. Ma jecla in la arko; Dayax gacmeedyada, fiidmeerta iyo tukeyaasha ayaa loo oggol yahay inay sidaas sameeyaan Dayaxu wuxuu si qarsoodi ah ugu xukumaa boqortooyada sharka, waa khiyaanada leh dhabannada wareega, waa jacayl hore, oo mugdi dhalaalaya oo loo yaqaan dayaxa. Dayaxu wuxuu dhalaalaa inta badan markay dadku si fiican u hurdaan.
Hal daqiiqad ayaa jirta marwalbana waa isku mid. Kaliya daqiiqaddu waa daqiiqad. Wadarta "daqiiqado" macno ma samayso. Marka waqti ma jiro. Hadana wali saacaddu waa la garaacayaa. Taasi waa sababta saacaddu u tahay beenaalayaal.
Dadku ma xasuusan karaan. Waxaan ka aragnaa wixii hadda ka dambeeya waqtigan xaadirka ah. Maalin kasta waxaad xasuusataa taariikhdi hore. Sida ay runtii ahaan jirtay ayaa si aan shaki lahayn looga lumay.
Lo'da asalka ah
Bilowgii caano ayaa jiray. Caalamka ayaa laga abuuray caano, waana sababtaas awgeed waxaa sidoo kale loo yaqaannaa Milky Way. Caanaha waxay ka soo baxeen candhuufta lo'da asalka ah, MUU weyn.
Cuntada cusub waxay u heesaysaa sidii iftiinka qoyaanka nolosha. Hilibka cusub waa ka caafimaad badan yahay hilibka qudhmay. Casiirka khudradda ayaa ka sii jilicsan dhiigga, maxaa yeelay xayawaanku waxay ku xumaadaan damacnimadooda.
Turtles waa uurjiifyo duug ah. Waxay ka soo jeedaan waqti aan waqti la joogin haba yaraatee. Xaalkooduna sidoo kale wuu ka duwan yahay. Kama koobna qurubyada ugu yar, laakiin waa saxar qafiif ah madaama adkeynta qadka ilaa halkan ka socoto. Dhulka dhabta ah weligiis ma dhinto.
Dabayshu si qarsoodi ah ayay u afuufaysa burburka qalcaddii burburka. Darbiyada madoow ayaa madhan dhacdooyinka. Dagaallo shalay dhacay, nabarradii waa maanta. Jiirka ayaa qori kara oo u sheegaya warqadda sheekada burburka dhintay. Shimbiraha ayaa u duulaya qorraxda fiidka cas ee casaanka meelna ma galaan.
Uurku markasta wuu horreeyaa. Sababta, asal ahaan, maraqa aasaasiga ah, Uranus, lo'da ugu horreysa, abtirsiinyada, duurjoogta, duulimaadka weyn, iyo dabcan shahaadooyinka iyo ayeeyada ayeeyooyinka ah. Tan dambe weli ma aysan aqoon ereyga gebi ahaanba halis ah. Ugu horeyntii khatarta ka jirta Vienna macnaheedu waa wax si gaar ah khatar u ah.
war been abuur ah
Dhulku waa fidsan yahay! Haddii dhulku yahay mid cayilan, dadka New Zealand way ku dhici doonaan dhulka. NASA ha ku dhejiso sawirkeeda been abuurka ah dameerkeeda. Waa inay hawada ka saareen hawada badan ee dayaxa!
Bilowgu si kadis ah ayuu ugu bilaaban karaa sidii duuf ama u boodboodo sidii ceeryaamo xilliga dayrta. Geedaha ayaa soo ifbaxa iyo dhallaanka waxay ku dhashaan bilaa-bilaash cisbitaalka. Bilowgu wuxuu u baahan yahay dhammaad: dhalashada cunugga wuxuu dhammaadaa uurka. Bilowgu weli ma yaqaan laftiisa: laakiin dhamaadka ugu horreeya bilowga ayaa og cidda ay ahayd.
Carruurtu waxay cunaan shukulaatada carruurta. Dadka waaweyn waxay cunaan shukulaatada dadka waaweyn. Labada wax soo saar waxay dhadhamiyaan sida shukulaatada. Sidaad arki karto, carruurtu ma ahan wax gaar ah. Iyagu waa cunista shukulaatada sida adiga iyo aniga. Caruurtu sidoo kale looma baahna in la waraabiyo, in kasta oo ay aadaan xanaanada.
A toadstool wuxuu jecel yahay xorriyadda uu u leeyahay. Waxay u baahan tahay roob xaga sare ka sareeya. Laakiin likaha casaanka ah wuu diidayaa inuu helo hambalyada Eebbe. Agaric duulaya wuxuu jeclaan lahaa inuu wax kasta gacanta ku hayo. Xitaa waa milkiile karbaash. Karti waa muhiim. Roobku wuxuu ku da'ayaa agaric duulaya. Ogeysiiska fangasku wuxuu leeyahay, inay jiraan waxyaabo kale oo aan ahayn xakamaynta, laakiin agaricku kuma dhicin inuu iskiis u furo. Markaas isagu wuu sameeyaa, maxaa yeelay waa geesi. Cabsidu waxay ka timaadaa xagga sare ilaa boqoshaada. Waar tan. Isagu hadda ma ahan toadstool, laakiin waa jiir yar, oo doonaya inuu ku noolaado godka dhexe ee godkeeda. Laakiin tani shaqeyn mayso. Jiirka ayaa barta falsafada isla markaana dib u cusbooneysiiya adduunka oo caan noqda.
Martin Luther iyo Paul ayaa hillaac ku dhuftay. Markiiba sida hillaaca, waxay noqdeen kuwa dadka iftiimiyey. Nalalka hillaaca miyuu ina hagaajin doonaa? Mise hillaaca biriishku waa uun wareeg gaaban oo abuuray munaafaqnimo? Waxaa lagaa rabaa inaad taas iskudaydo inta lagu jiro roobka duufaanta ee soo socota.
JF Kennedy oo ku taal Bielefeld
Fikrad shirqool lagu eedeeyay ayaa sheegaya in magaalada Bielefeld xitaa aysan jirin. Laga soo bilaabo waqti cayiman waqtigaas uma suurtoobin hoosku inuu daboolo jiritaanka Bielefeld. Taasi waa sababta ay muhiim ugu ahayd iyaga inay u soo bandhigaan shirqoolka sidii aragti ahaan ama kaftan, si uusan qofna u helin fekerka ah been-abuurka Bielefeld inuu yahay runta bannaan. Laakiin nasiib wanaag waxaa jira Bill. Bishii Luulyo 24, 1963, Bill Clinton wuxuu Aqalka Cad ku booqdey Madaxweynaha Mareykanka John F. Kennedy Aqalka Cad wuuna gacan qaaday. Clinton ayaa ka dhawaajisay, “Waxaan noqon doonaa Madaxweyne!” Ficilkan sixirka ah, Clinton waxa ay xaday masiirkeedii iyo aqoonsigii uu markaa ka qaatay Madaxweyne Kennedy. Natiijada: Kennedy waa inuu dhinto. Ama halkii uu ka heli lahaa doppelganger.Kan dhabta ah ee Kennedy waa qaboojiyay. Markii jiritaanka beenta ah ee Bielefeld loogu hanjabay inuu iftiimin doono, Kennedy ayaa mar kale la dhalaalay. Kadib qalliinka qurxinta iyo tababarka degdegga ah ee Jarmalka, Kennedy hadda waa Duqa Magaalada ee hooska leh ee magaalada Bielefeld isaga oo ku hoos jira magaca beenta ah Pit Clausen.
Sindbart: Hey adiga, waan ku arki karaa!
Dabayl: Dabeyl! Aniguna adiga. Waxaa la yaab leh markaad tixgeliso inaysan labadeenuba jirin.
Sindbart: Markii laba qof kulmaan oo aan xitaa jirin, waxay noqdaan wax dhab ah oo ku saabsan midba midka kale iyo kan kale, maxaa yeelay labadooduba waxay ku kulmayaan isla heerar, kuwaas oo ah heerka jiritaan la'aanta.
Dabeyl-dhireed: Marar dhif ah inaad la kulanto dad adiga oo kale ah. Si dhif ah ayaad u run sheegaysaa. Waa inaan fursad u helnaa inaan wada-hadal dheer la yeelanno khiyaanada iyo runta.
Sindbart: Waa hagaag, waan joogi doonaa halkaas.
Badda wey isbadali kartaa weynaanteeda maxaa yeelay waxay qarsataa sir. Badda waxay ka kooban tahay ilmadaha ilaahyada (ilmada waxay ku jiraan cusbo). Badduna waa cuntada dhulka. Haraadka cidlada, si kastaba ha noqotee, muddo dheer tan iyo markii la qalajiyey, cidlada uma baahna inay sii noolaato.
Arnold Heitermann ma daawan doono telefishanka mana akhrin doono wargeyska. Kaliya cinwaanada. Otto Caadi ahaan, waxa hadda jira waa muhiim, wax kasta oo kale ayaa muhiim ah. Arnold wuxuu xiiseynayaa sawirka weyn, ma ahan qariidada. Intaa waxaa sii dheer, ma ogaan kartid haddii macluumaadku sax yahay. Haddii cinwaanka ay tahay inuu akhriyo: "Berrito dunidu way dhammaan doontaa!", Mr. Heitermann wuxuu runtii akhrin lahaa macluumaadka oo dhan. Dhamaadka adduunku runti wuu kuu saameyn karaa, arrimo shakhsi ahaaneed awgood.
Biyuhu waxay jecel yihiin inay dhaqaaqaan. Haddii dabiicigu u oggolaado, sidoo kale way qulqulaysaa. Biyuhu waa cusub oo heesaha laftiisa. Iftiimin iftiin leh dhaqdhaqaaqa hirarkiisa. Biyuhu waa meelwalba oo ay noloshu ku jirto. Biyuhu waa dabacsan yihiin ilaa inta aan salka hoose lagu nasan. Qoyaanka ayaa dhar xidhanaya biyaha, jirridda biyuhu wali waa mid aan la arki karin.
Waa inaadan noqon xayawaan, oo aadan ahayn xanaaq cabsi leh. Qof kasta oo loo dhisay sida ugu dhow biyaha sidii xayawaanku weli ku nool yahay nafta. Nafta iyo harada waa isku biyo, kalluun iyo xayawaanku taas way ogyihiin. Runtii kama baqi kartid biyaha, xayawaan qalalan kaliya ayaa awood kara. Weydii bakaylaha cabsida leh! Maaha feeraha cabsida leh! Qulqulaya weligood kama baxaan qaan-gaarka. Xayawaanku waa kalluun aan uga dhigin xayawaankii dhulka: guuldarrooyin horumar. Isagu ma kalluun yahay, laakiin kuma filna inuu daanyeero sameeyo. Frogs weli waa cagaar gadaashiisa dhegaha, kaliya maahan. Badanaa rahyadu waxay yeeshaan finan, laakiin markaa waxaa loo yaqaanaa toads.
Buurta duurjoogta ah
Buurta duurjoogta ah waxay ka booddaa saqafka guri ee magaalada qalalan ee Rome. Doofaarradii duurjoogta ahaa dhabarkooda dhabarkooda ayaa dhabarkooda la garaacay. Hawsha duurjoogta ah waxba ma jebin, si sahal ah ayay u garaacdaa oo noolaataa. Xaraashka duurjoogta ah ee noocan oo kale ahi runti waa xoog badan yahay. Dhiigaagu ma engegay. Casiirkeeda dabka ahi wuxuu si aan kala go 'lahayn ugu jiidayaa wareega wadnaha xididdada ee istaroogga awoodda leh.
Dareemidu midab ma leh. Iyagu waa tuugada aan aaminka ahayn, taageeradooda kaliya waa waaritaan. Miyaad qalbigaaga u kiraysan lahayd dareemo Dareemayaashu way ku kulul yihiin dad badan iyo tiro badan, way sii xoogaystaan ​​oo way daciifaan, waxay si lama-filaan ah ugu laabtaan sidii fardihii fardoolaha.
Ballaadhida adduunku waxay ku dhex daadataa moolka. Wax walbana way seexdaan dayaxuuna cirka ayuu ku jiraa. Iftiinkeeduna lacag buu u baxayaa. Gacmuhu wuxuu doonayaa inuu qabsado Dayaxa oo wuu sameeyaa: Wuxuu burburiyey dayaxii. Dhiig qumman oo isla siman, wuxuu ka soo dhacaa goob ay mar ahayd dayaxu. Adduunku wuu gariiraa.
Dhimashadu way dafirtaa nolosha, waxayna suurtagelisaa isla waqtigaas. Muxuu gorgorku u dul noolaan karaa? Muxuu dhabarka ka xirtaa? Wuxuu ku noolaan karaa oo kaliya isagoo laaya xayawaan kale. Sida nin! Khudraduhu waa kuwa wax wanaagsan sameeya. Laakiin iyaguna waa inay ka jawaabaan wicitaanka dabiiciga. Ka dib oo dhan, dhirta sidoo kale waa waxyaabo nool. Khudaarta Fiitamiinku waa yar yihiin. Daacadnimadooda ayaa ka dhigaysa inay midabeysan yihiin, waxay yihiin biovampires. Khudaartu waxay cabtaa dhiigga anshaxa. Ugaarsiga ugu weyn waa nin.
Muuqaalkii telefishanka dhintay
Telefishanka ayaa dul taagan oo lafaha fadhiya horteeda. Lafaha qalfoofkiisa madhan kama sii dareemaan wax barnaamij ah. Qof baa telefishanka iska daaya: Ninka lafta ayaa hadda ogaaday inuu wax ka maqan yahay oo uu xanaaqay. Keliya bixitaanku ma ogaanayo inuu dhintay.
Ujeedada noloshu waa in la quudiyo cilmi-baadheyahanka weyn. Ugu yaraan taasi waa aragtida Dr. Xaragada. Wuxuu rumeysan yahay waxyaabaha soo socda: Dhaqaaleyahannada waaweyn ee beeraha waxay ku beerayaan abuurka nafteenna dhulka si loo gaaro jannada fog. Jeermiga noloshiisa jeermiga naftu wuxuu ku koraa dhegta wax soo saar leh ee nafta. Dhaqaaleyahankii weynaa ee beeraha ayaa soo goosta dhegtan dhimashadeena ka dib waana cunaa. Dr. Brainlight waa mataanaha walaal Dr. Xalaasha. Subax kasta, Dr. Brainlight wuxuu tuuraa ka dib dalagyada isku wada jirka ah markuu ka fikiro fikirka xun ee walaalkiis.
Qorraxdu waa wadnaha adduunka, waxaa ku yaal meel ka ballaadhan bannaanda bannaan. Waxay leedahay calool weyn, oo ifaysa. Qorraxdu waxay dhalaysaa dunida. Qorraxdu waxay cuntaa dunida. Labaduba si isku mid ah. Qorraxdu waa wax walba. Waxay ku caddahay dadka da'da ah, waxay jaale ku tahay dhalinyarada. Qorraxdu ma leh laalaab wajigaaga ku yaal.
Vampire ayaa muraayadda ka muuqda: nin leh timo madow iyo muraayadaha indhaha ayaa ka muuqda lacagta; wuxuu leeyahay weji casaan ah. Vampire-ka wuxuu u arkaa inay u egtahay qof caadi ah muraayadda. Jirku wuxuu kaliya isu gartaa muraayadda, haddii uu toos u fiiriyo gacmihiisa iyo jirkiisa, markaa qofna ma arko. Ma ahan wax caadi ah, xitaa vampires. Xaqiiqdi isagu wuxuu leeyahay rabbaaniyiin.
Dhirtu waa xayawaan cagaaran oo aan socon karin. Caleemihiisu waa dhagxan biyo laga sameeyay. Nalalka qorraxdu waxay dhammaantood ka dhigtaa cagaar. Dhagax, biyo iyo qorraxdaba mar qudha ayay nolosha bixiyaan. Dhirtu waxay badanaa ka kooban tahay korniinka, waxay ku raaxaysataa koritaanka. Koraaya ma leh hiddo-wadayaal, waxay ku baranaysaa iyaga daqiiqad kasta. Qorshahu ma korayo xitaa haddii aad fuliso. Dhirtu, dhinaca kale, si ba'an ayey ugu koraan nolosha.
Kaliya taa waxaa laga yaabaa in dhowr madax adag ay madaxooda kaga dhuftaan adkeynta. Hardness waxay bixisaa iska caabin iyo cimri dherer. Lafaha ayaa adag. Badanaa kuwa adag ayaa sii adkaanaya. Si kastaba ha noqotee, guska ayaa adag mararka qaarkood. - Waa maxay sababta? - Cidhifka adagna wuxuu u taagan yahay sidii xariiq qasab ah oo qolka ah. Xaragada waa inaan la iska indhatirin; waxaad ku burburin kartaa madaxaaga. Marka laba gidaar isku dhacaan, isku dhaca waxaa loogu yeedhaa gees. Markaa geesku waa natiijada isku dhaca. Sidaa darteed looma aha qalbi jabka wadnaha. Dhagxaanta sidoo kale way adag yihiin. Dhagaxu waa shay, wejigeedna ma leh, maxaa yeelay dhagaxu wuxuu u eg yahay dhagaxyo kale. Shareecoodu wax kastaba way ka siman yihiin, Kubadda Cagta, miis ama cadayga, dhammaantood waa wax uun. Dhagaxyada meel walba yaalaywaxaa loo yaqaan run. Waxaad ku burburin kartaa qalfoofka dadka kale dhagax. Taasi waxay muhiim u ahayd da'da Stone. Maanta dhagxaanta qaar horeyba way u hadli karaan, dhagxaantaas waxaa loo yaqaan "taleefannada gacanta". Haddii aan si sax ah uga fikiro: Waxa kale oo jira dhagaxyo qurux badan, kuwaas oo ah dhagxan qaali ah. Riwaayadaha ayaa aruuriya.
The soo ururiyay waa cufan, mararka qaarkood sidoo kale cidhiidhi ah. Wixii la soo aruuriyey wuxuu siinayaa nabadgelyo ahaan agab ahaan. Mise culays baa saaran. Wixii la soo ururiyey way ka adag yihiin wax ururinta. Haddii ururinta ay ka adag tahay waxa la soo uruuriyey, markaa mid ayaa ka hadlaysa '' ugaadhsi ''.
Waxyaabaha superfluous ah laguma darin waxa koray. Superfluous ma uusan aqoon dareeraha intii ay weyneysey. In kasta oo qulqulka biyuhu uu noqon karo mid hodan ah, haddana mararka qaarkood ku deeqa, superfluous-ku kaliya maahan wax faaido ah mooyee, laakiin wuxuu sidoo kale caqabad ku yahay walxaha nool ee horumarintiisa. Waxyaabaha aan caadiga ahayn waa qashin.
Hugo waxay leedahay goos goos. Muhiimadiisa ayaa ah in isbadalku uu ku dhibayo shaashadiisa. Taas ayaa Hugo waalan. Hugo wuxuu ku lahaa cillad wejigiisa muddo tobanaan sano ah. Isagoo taagan oo muraayadda hortiisa taagan, wuxuu fiiriyay ciriirigiisa ilaa dhakhtarkiisa maqaarku uu buro buro. Hugo waxay leedahay goos goos. Laakiin kaliya leh quirks shaqsiyeed. Haday wax waliba cillad leeyihiin, sida daaqada gabi ahaanba xoqday, Hugo waxba kama qabo. Hugo runtii wuxuu leeyahay quus.
Fikirka madhan ayaa quudiya naagtiisa barafka ah. Haweeneyda barafka leh waxaa loo yaqaanaa neurosis. Gabi ahaanba dhib ma leh, waa Woody Allen. Waad ku qosli kartaa xanuunka 'neurosis' sababta oo ah weirdosku waa dad qosol badan. Laakiin barafkii hore ma aha mid aan dhib lahayn. Haweeney barafka daadata ma jiro wax dhiig ah, laakiin barafkii shalay ayaa ku jira caajis. Barafkii hore ayaa galay cilminafsiga. Daaweynta noocan ahi sidoo kale waa neurosis, waxay u cad tahay sida baraf cusub.
Eyga iyo bisadu waxay galaan teraabiyada lammaanaha. Dabiibuhu waa dhurwaa. Eyga iyo bisadu waxay doonayaan inay badbaadiyaan xiriirkooda. Daaweyntu way fashilantay. Waa maxay sababta? Muxuu noqon karaa? Hubaashii dabiibaha, dhammaantood waxay leeyihiin dhibaato laftooda.
Cheplin wuxuu aadayaa qolka qolka lagu qoslo, si uu u hayo shirkadda maydkiisa. Waxay ahayd inuu dilo dad badan si uu lacag u helo. Dhibaatada adduun iyo haweenku waa in aan lagu khaldin. Cheplin wuxuu u ololeeyaa xayiraad guud oo dhan kaftanka ah ee Jarmalka oo dhan, waxyaabaha ka reeban waa waxa loogu yeero xarumaha qosolka, taas oo dadku ku qosli karaan cod dheer ka dib markay bixiyaan khidmadda kaftanka.
Qosol ayaa ku faraxsan bushimahiisa. Qosol daran ayaa isu beddelaya qosol qosol leh. Qosol qosol ah kama kici karo fadhiga fadhiga. Qosol dhab ah maahan wax lagu qoslo, waa uun farxad. Kaliya qasabka ayaa ku kaftamaya geedka silica.
gebi ahaanba qosol
Isolde: Detlef, kula socotid weligiin maba ogaanaysid inaad carbis tahay ama inaad tahay mid daran.
Detlef: Waa wax aad u fudud: haddii aan qosol yeesho, ka dib anigu halis baan ahay, oo haddii aan dhab ahayna waa aniga oo iska kaynaya.
Isolde: Sideen wax kale uga sheegi karaa waxa kale?
Detlef: Kan hore waa kiiska maalmaha xitaa tan dambe waa kiiska maalmaha aan caadi aheyn. Mise si kale ayay ahayd? Gabi ahaanba waan wareersanahay.
Isolde: Waan ku waalanahay ninkaas!
Miss Dr. Kackebart-Struller: Nin Otto! Ma garanaysaa waxa aad ku samaynayso lakabka ozone? Markasta oo ay fududaato, ma aha oo keliya in afkaartaadu sii weynaato, laakiin daloolka Ozone sidoo kale. Farti kasta, methane wuxuu ku shubaa jawiga, kaas oo kululeeya dhulka. Ha tagin! Waa inaan badbaadino deegaankeena!
Otto Struller: Waad saxantahay, Mausi, sax baad tahay. Hadda waxaan aadayaa meesha wax lagu tego, ee aan quudiyo xamaamyada.
Duurka duurka, xididdada geedaha ayaa ka taga dhulkooda oo socodsiiya dalka oo dhan. Nabaddu ma soo laabanayso, laakiin waxay ku sii baxdaa horumar. Waxay dul fuulaysaa buuraha, Waxay dhex martaa dooxooyinka. Mararka qaarkood iyadu sidoo kale way ku booddaa.
Duubista ama wareegga wareeggu waa dhaqdhaqaaq wareeg ah oo ku saabsan xarunteeda. Duubista giraangiraha ayaa la gooyaa. Isugeynta lafteeda isma rog-rogto, waxay sii ahaataa mid aan jirin oo la xidhiidha xarunteeda. Haddii kitaabku ka wareego wareegga oo u wareego labajibbaarane, waa bilaash in la dhaqaaqo. Baaskiilku wuxuu keliya oo ogeysiinayaa in muuqaalka dhulku u gudbayo, baaskiil laftiisa ayaa joogsanaya.
Naso oo jimicso
Nasashada ayaa ku raaxeysata aqoonsigooda. Nasashada waxaa lagu qeexi karaa maqnaanshaha dhaqdhaqaaqa dibadda ee khasabka ah. Markaa nasasho majirto diskooga. Mana saarna autobahn midkoodna. Dhaqdhaqaaqa ka imaatinka nasashada waa wax macquul ah. Jiritaanka ayaa leh nasasho. Waxa kale oo jira deganaansho khasab ah oo loo yaqaan 'Bud Budismism'. Deganaanshaha noocan ahi waa geerida lagu beero dhulka, waxay salka ku haysaa xakamaynta iyo baabi'inta jahwareerka. Deganaansho dhab ah, si kastaba ha noqotee, waxay ku nooshahay xorriyad.
Himilada hummingbird waxay u duushaa barxad madadaalo oo ay dadku ku kala baxaan. 52 qof oo taaj ah ayaa ku nool guriga. Qofna iyo qof walbaa waa boqoro iyo nacas isku waqti. Dadka ku sugan qasriga waa dhamaan hermaphrodites. Adiga naftaada waad ku sameyn kareysaa haddii aad dareento inaad jeceshahay. Laakiin waxay aad u daneynayaan naqshadeynta adduunyada ciyaarta: waa duminayaan. Spooling waa khamaar halis ah. Halkan waxaad kula kaashaneysaa Jojos, boqorrada. Sida doqonno ah, boqorradii waxay taaj uga dhigeen hoolka weyn ee isha biyaha ka hooseeya. Koofiyaddu waxay u adeegtaa sidii buul oo loogu talagalay hummingbirds. King Crimson wuxuu qoraa macno darro. Lama hadli kartid nin sidaas oo kale ah.
Dhididku kama shaqeeyo dhulkiisa ninna, oo daallan, maxaa yeelay halkii laf dhabar u ahaan lahayd, shaqadu waxay leedahay naas mahadnaq, oo lagu sharraxay kibir. Oofintooda waxay kahelaysaa shaqo wadne qabad. Kuwa shaqeeyaa si dhakhso leh ayey u illoobi karaan maydkooda dhulka hoostiisa. Shaqadu waxay ubaahantahay madax furasho, laakiin waligeed taasi ma qiranayso. Shaqadu waa indho la'aan, ma aragto inay shaqeyneyso, waa ay ogtahay oo keliya. Masiixa oo ah Bixiyaha wuxuu dheeraaday. Ninku naftiisuu ku furtaa shaqada: cilmu-nafsi-nafsi ahaan naftaada ayaad ku shaqeysaa.
Dhaqdhaqaaqa dhabta ahi waa gudaha. Faras kaligiis baa dhaqaajiya, laakiin baabuur waxaa wadata xoogga warankiisa. Dhaqdhaqaaqa ayaa u muuqda inuu u dhaqaaqi doono qaab dabiici ah, taas oo ah hirarka mowjadaha. Socodka, dabaasha, duulaanka ama wadista gaariga, kuwani dhammaan waa dhaqdhaqaaqyo. Maalmahan mid ayaa inta badan wareega. Mid ayaa sidoo kale u dhaqaaqi kara halkaas. Laakiin qofna mar dambe ma qaadan karo. Waxaad joogtaa goobta.
Dabayshu waxay xannibaysaa wejiga Frigg. Waqtigu wuu dhammaanayaa. Biyuhu waxay ku baaba'aan godka. Wax walba way socdaan, way cararayaan. Kaadidu way socotaa, ilmada ayaa orda. Qofna ma qabo Frigg, dabeyshu waa keliya. Cagahaaga waxaa daboolay kabo qaro weyn. Ka waran haddii ay lug cagaheeda ku socdaan? Dabadeedna dabayshu iyada ayaa qaadi doonta Frigg oo bilaash ah. Kabahaheeda culus waa culeyskii hore. Dabayl la yiraahdo Wahuna ayaa timaha ka soo baxda. Sleipnir, faras sideed lugood leh, ayaa ku boodbooday Frigga. Frigga waa la soo jiidatay, faraska waxaa loo gelin karaa ilaaha dabaysha oo waxaa loo qaadi karaa si adag, cago-la'aan, iyada oo aan.
Sameynta ugu nadiifsan waxaa sameeya mashiinka. Mashiinka waxba ma dareemayo, sidaa darteed waxay ku shaqeysaa rajo beel. Waxay sameyneysaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada gacanta ee ay hawlwadeennada caafimadku adeegsan jireen waayihii hore. Gacan-qabsi la'aan dareen la’aan ama nolol, makaanik uun, dhaqdhaqaaq aan macno lahayn, ujeedo oo keliya. Way fiicantahay markay mashiinku nacasku noo shaqeeyo. Laakiin hal-abuurka mashiinnada ayaa mar qudha ku beeray nacasnimo. Mashiinada waxay sii wadi doonaan inay naga xukumaan bannaanka iyo doqonnimadooda. Sirdoonka farshaxanka ayaa lagu kala duwan yahay, laakiin waxay wali doqon tahay. Annaga qudheennu waxaan nahay uun cog aaladda mashiinka adduunka ugu weyn.
Mulkiiluhu gacmihiisa buu ugu yeeraa naftiisa. Atamyada gacmahiisa ku jira milkiiluhu iska leh. Atomka gacantiisa ayaa ku habboon oo keliya qaabka awoodiisa amaah. Dhimashada milkiilaha kadib, atomihii hore ee gacantiisu waxay ku habboon yihiin muuqaal ka duwan. Mulkiiluhu wuxuu dareemayaa guriga gacantiisa, wuxuu ku xidhnaa gacantiisa. Xididdadaasi waa aqoonsigiisa. Maaha gacanta lafteeda.
Maqaarka iyo saxarku waxay ku wada nool yihiin tufaaxa. Labaduba ma guursadeen? Inbadan waxay ku wada noolyihiin tufaaxa: laf dhabarta, cagaarka, miraha, jaranjarada geedka. Tufaaxa wuxuu moodayaa: 'Waxaan leeyahay tayo, laakiin aniga ma ihi tayadeyda. Haddii aan nafteyda fiiriyo, waxaan kaliya helaa guryo, laakiin ma jiro. ' Xitaa astaamo tufaaxeed kasta oo tufaaxeed hadda waxay ku socotaa jidkeeda. Spherical wuxuu tagaa waqooyiga, cagaarku wuxuu tagaa koonfurta. Midhaha xagga galbeed, iyo xagga bari ee tufaaxa xagga bari. Maahan tufaax, weligeed ma jiri jirin. Tufaaxa ayaa furay aqoonsigiisa been abuurka ah.Isaga uun baa laga soo tuuray midnimadiisa. Aaway dhalashada tufaaxeedii? Waxay fadhisaa baararka waxayna isu ogolaataa inay isqariso!
Gabaygu macnihiisu waa isu dhiibida macnaha. Si kastaba ha noqotee, gabayada qorayaasha mararka qaarkood waa la shaabadeeyey si akhristaha uusan u furi karin sanduuqa macnaha. Keligiis qoraha ayaa fahamsan nuxurka gabayga inta uu qorayo. Xitaa qoraaga, awooddiisu aad ayey u adag tahay subaxda xigta.
Caddaani waxa uu si duullimaad leh ugu duulaa si cad iyada oo aan la qarin. Guriyadu badanaa waa hufan yihiin. In kasta oo hufan uu yeelan karo culeys, ma fududa in la arko. Wareegtada ayaa noqoneysa mid hufan goorta ay noqoneyso mid furan.
in la qabto
Qabsashadu waxay ku gaadhaysaa ugaadhsigeeda xagga mobilada leh guul. Sidaa darteed, badanaa kalluunka waxay kujiraan qafis gaar ah. Way simbiriirixan yihiin waxayna ku nool yihiin biyo dhaqaaqa, laakiin wali waa la qabsan karaa.
Dembigu waa u qalmaa kaliya haddii aadan ku qabsan. Daanyeer ayaa u yimaada xayawaanka xitaa haddii aysan wax khalad ah sameynin. Xayawaanku waa xabsi xayawaanku ku habboon yahay xayawaanku. Xayawaanka duurjoogta ah qaar baa lagu xidhaa meeriska. Caruurtu waxay fadhiyaan xabsiga waxbarashada waalidkood. Haweenka ayaa ku jira xabsi xabsi ku tiirsanaanta nimankooda.
sirta ugu sareysa
Sirta waa inaysan arkin indhaha dadka kale. Keligiis ayuu fadhiyaa (ama kuwa shirqoola) baalashiisa oo waxaa suuragal ah inuu halkaa ku sameeyo: wuu rogayaa, wuu dumaa, wuu farxaa, wuu qalloociyaa waxyaalo qalloocan, wuu galiyaa, wuu buriyaa kuwa kale, wuu kugu qoslaa, waa baqayaa, way is ilaalinaysaa, way diidaysaa, ama waxay leedahay ilmo. Sirta: garan mayno waxay sameyneyso. Taasi waxay sii ahaaneysaa sir.
Si aad udoosho
Duullimaadyada ayaa ku duulaya iyada oo aan cagaha lahayn badda weyn. Duulimaadka, kan sare iyo kan hooseba waa la wada ciyaarayaa. Shimbiraha ayaa leh awood iyadoon ku xadgudbin adduunka. Tani waa aqoonyahanno. Toadstools, si kastaba ha noqotee, ma duuli karaan, baalasheedu waa kuxiran yihiin. Baalalkii shimbiraha waxay u kala bixin jireen cabsi. Taasi waa meesha ay joogaan guriga. Baalalku waa gacmaha duulista, waxay ka samaysan yihiin awood. Shimbiruhu si xor ah ayey u duulaan iyagoon ku dhicin bisad dhexdeeda. Si kastaba ha noqotee, shaqaaluhu si dhakhso leh ayey ula dhacsan yihiin madaxdiisa ama sida ay nolosha u culus tahay.
Iftiinka ayaa si sahal ah ugu duulaya xujooyinka halxiraalaha ah, waxay si fudud u dhaafaysaa daloolada culus. Iftiinka wuxuu ku jeedaa dusha sare. Xaabada waxay ku dul sababeysaa biyaha maxaa yeelay way ka fududtahay biyaha. Kubadda hawada kulul ayaa dhulka uga soo duushaa dhulka cirka buluugga ah. Waxyaabaha ugu fudud ayaa si dhakhso leh loo xisaabinayaa. Waxyaabaha nacasnimada leh ee noocan oo kale ah ayaa si fudud u dhaca.
Baraf baraf leh
Dabayl barafku si taxaddar leh ayuu u dhacayaa. Way aamusantahay. Flake wuxuu ka yimid adduun kale. Waxay siineysaa qaabdhismeed adduunkan, haddii kale dhammaan meelaha magnetic waa burburayaan. Doorarka woqooyi iyo koonfurta, dhul-gariirku wuxuu ku dhacaa barafka. Laga soo bilaabo dherarka dhulka, barafku wuxuu abaabulayaa isbeddello qarsoodi ah oo adduunka ka dhaca. Magnetistiisnimadiisu waxay galaa dadka deggan dhulka, waxayna ka dhigtaa inay noqdaan muwaadiniin culus.
Difaaca noocan ah waa wax fiican. Ilaalinta ayaa ah waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay: ilaalinta dastuurka, ilaalinta hoolka, sunta cayayaanka, ilaalinta macluumaadka iyo ilaalinta fikirka. Maadan soo booqan Ilaalinta Maskaxda? Way imaanaysaa, bal sug oo arag.
Caano ilkaha iyo calali calafka iyo calali. Dheef-shiidka waxay jeceshahay finfiican oo ka fiican ilaa cunnada ay ka fiicnaaneyso si loogu dhex daro hilibkaaga. Si kastaba ha noqotee, cuntada had iyo jeer waa waxoogaa sun ah. Dhulku waa sun. Ma ahan gurigeenna. Xayawaanku waxay u dheef-shiidi karaan si ka wanaagsan bini-aadamka, waxay ku nool yihiin dhulka ugu dhow.
Waxa aan dul taaganahay waxaa loo yaqaannaa dhulka. Mararka qaarkood waxaa sidoo kale loo yaqaanaa carrada. Istaag iyo dhulku way adag yihiin. Dhulku wuxuu kaloo noqon karaa humus ama dhagax. Waxa si gaar ah loo arki karo waa maaddada dhulka, waa cufan yahay oo culus. Dhulku waa nabad, dhulku waa doqon. Hooyada weyn ee weyn waxay leedahay wajiga. Miyay leedahay diirimaad? Xididdadu dhulkuu gaadhaa, iyaguna dhulka way fahmaan. Xididdadu waxay ka mid yihiin dhulka intiisa kale.
Shinnida waxay ku nooshahay qaro weyn, gudaha. Shinnidu waxay u baxdaa meel aan harraad lahayn. Waxay ku soo dhacday dhul gariir sida baraf baraf ah. Bees ayaa sii deysay maskaxdooda sida qabow qabow. Ilaa iyo inta barafku barafoobay, waa wakhtiga geedku firidhsan yahay. Haddii flaku dillaaco, kalinimada ayaa qaawan. Markay sifeeyaan nektarku, shinnida waxay isku xiraa dhammaan qeybaha kala duwan ee dunida oo ay culeys helaan, waxay cunaan xoogga culeyska. Nectar wuxuu ahaa buug aan wali la aqrin. Xitaa ma aha qoraaga.
Culeysku badanaa waa ku weyn yahay tiradiisa. Hogaanka, si kastaba ha noqotee, cufnaanta waa yar tahay. Cufnaanta xoojisaa. Waxay saameyn ku yeelaneysaa kaliya cufkiisa, ee ma ahan midabkiisa, maxaa yeelay culeyska mugdi aad ayuu u madow yahay inuu noqdo midab. Dhibaatada ma fahmin waxa funny. Qosol iyo hurdo culus ayaa si wada jir ah sonkor ugu jirta. Miisaanku ma ka yimaadaa xagga sare ama hoosta? Marka kuleylku adkaado, waxay noqotaa cufis. Ka warran dhagaxa aan la rogrogmi karin? Miyuu culus yahay mise aad buu u adag yahay? Isagu waa naxariis daran yahay! Wey ka jilicsan tahay naxariis darada. Ma sahlan tahay markaa? Waa sidaas oo kale!
Dabayl ayaa ka dulmaray geedaha iyo guryaha. Awooda dabaysha lama arki karo, saameynteeda oo keliya ayaa la arki karaa. Dabayl ayaa baabi'isa kuwa jira. Cajiin dilaacaa dabaysha ayaa ku dhacda, oo dambasuna sidoo kale. Dabaylku aad ayey u duulayaan. Laakiin had iyo jeer way afuuftaa.
Hanti waa mid gaar ah. Iyadu waa wax isaga Tirada waa qaraabo; had iyo jeer waxaa lagu cabbiraa isbarbar dhig. Luud milkiile ma leh. Isolde waxay leedahay caloosha weyn, laakiin dufanka ma leh. Wax kasta oo superfluous leeyihiin badan. Macno malahan inta dildilaacday maskaxda maskaxda ee Einstein. Waa hantida maskaxda ka dhigaysa mid iska leh, ma aha tirada dildilaaca. Ma is barbar dhigikarto tufaaxa iyo isteroberi, kaliya miisaankooda.
Kabayga dhagaxyada waxaa lagu magacaabaa ciid. Kala-goynta ciidda ayaa aad u yar oo waxay mar labaad unug yeelayaan beel ahaan go'doon. Ciidda ayaa markaa la dareemayaa guud ahaan. Waxkasta waa qaylo, laakiin ciiddu ma ooyi karto maxaa yeelay waa mid aad u qallalan. Dhagaxyadu ma laha dhiig iyo biyo toona, xitaa sida ciidda oo kale. Ilmada kooxaha murugada leh waxay ku deeqaan biyo cusbo sida badda. Taasi waa sababta ciidda inta badan looga helo xeeb meesha badda ku taal.
Dadku kaliya waxay ku jiraan qaab ahaan. Hal qof kaligiis ma noqon karo. Bini’aadamka sidii xayawaan lo ’ah wuxuu noqonayaa‘ ’dad’ ’. Dad badan baa ka kooban. Dhiiga dadku waa dhiigga eheladooda. Qofka, dhanka kale, wuxuu leeyahay marinkiisa dhiigga. Marka laga hadlayo Yuhuudda qadiimka ah, dhiigga Ibraahim wuxuu usocdaa lugahaaga dambe. Dadka iyo dadka hal abuurka leh aqoonsi ayey ku leeyihiin kooxda, naftooda kuma eka.
Baabuloon caruur ma ahayn: aad bay ugu weynayd kan ugu weyn. Waxa kale oo magaalada New York ku yaal dabaqyo dhaadheer. Laakiin kuwan waa inay baabi'iyaan argagixisada maxaa yeelay waxay rabaan inay xoqaan Ilaah. Dadku waxay ku ciyaaraan agagaarka kubka dahabka ah, koritaanka dhaqaalaha iyo dhakhtarka qalliinka qurxinta. Goorma ayaa cadhada Ilaah ugu dambayn doonta oo soo dejin doonta dadka dembiga leh weelka qashinka?
Fred wuxuu si aan sharciyeysneyn uheley qalabka walxaha culus ee u dhawaa Geneva habeenkii wuxuuna hada kudhacayaa giraan wareega: Wuxuu arkaa walxaha cagaaran ee iftiinka ka gudbaya.
Fred: walxo walax, waad hadli kartaa sidoo kale?
Walxaha cagaaran: Waxaan leeyahay madax xanuun, taasi waa wax xun maxaa yeelay waxaan kaliya ka kooban yahay madax. Maaddaama jimicsiga ihi i soo ogaado, si fiican uma isticmaali karo adduunka. Xitaa siyaasadu waxay fidsan tahay xukunka.
Walxaha gaduudan ayaa soo dhaafa: Waxay xaddidaysaa carrabkiisa Fred, oo xitaa wuu ka guduudan yahay walxaha laftiisa.
walxaha gaduudan: Waxaan dab ku hoos dhigayaa dameerka lacagta. Badanaa lacagtu waa macluumaad. Dabkaygu wuxuu qiimo siiyaa macluumaadka. Saddexagal waa inuu ku duulaa, waxayna leedahay isha fooddiisa.
Saddex-xagal: Waxaan ahay walxaha ugu weyn ee jira. Run ahaantii walxaha yaryar waxay kujiraan cadaabta fisikiska. Yar yari run malaha. Waxyaabaha ballaadhan ayaa sii kordha, kolba sida dhabta ah ayay u noqdaan. - Fred ayaa la yaabay.
Fowdo waa jahwareer ay kuwa hal abuurka ah ee kuwa kale u adeegsadaan inay galaan dunida oo aan lagu xakameyn karin ilaalinta maskaxda. Fowdo waa midabo. Fowdo ayaa nadiifisa qashinka wixii tagay. Fowdo ayaa dhaanto mana ogi waxa loogu talagalay.
Qoraalka, luuqaddu waxay ugu hadashaa si aamusnaan ah codka, laakiin dhalaalaya miyirka. Culimadu waa farshaxan yaqaaniin xaqiiq ah. Qoristu had iyo jeer waa wax qoran, xitaa inta wax la qorayo. Wixii la qoray waa kama dambeys oo wuu dheer yahay khamriga wanaagsan. Ereygu wax buu qoraa waqtiga oo dhan.
Qoob-ka-ciyaarku waa wax laga naxo. Qof kasta oo qoob-ka-ciyaaraya waa waalan yahay. Laakiin qoob ka ciyaarku sidoo kale wuu qaboobi karaa haddii aad tahay qof aan xisaab lahayn. Kuwa fikirku waa inaysan qoob-ka-ciyaarin. Qoob-ka-ciyaarku wuxuu buriyaa cadeyntooda maskaxeed. Ku hungoobey cunno la'aan jacayl, waalal sida bahalku u cuno nidaamka xumaanta:
Dhibicyo ilmada ka soo dhacaya ayaa samada ka soo dhacaya. Waxay ku soo urursadaan dhulka si ay u sameeyaan durdur durdur ah u kaca. Erwin wuxuu fadhiyaa doon dusheeda isagoo ilmeynaya qulqulaya ilmada. Webiga qulqulaya buuq. Dabku wuxuu gubtaa si sharaf ah Wotan oo ku taal dhinaca midig ee webiga. Banka bidix waxaa ku yaal geed leh shimbir dhagax leh. Erwin wuxuu ku sii socdaa doonida dusheeda. Hadda waa baraf. Baastoorku wuxuu arki karaa nin baraf ah oo dul jooga banka u dhexeeya irbadaha geed. Indhaha barafka lihi waa nool yahay, waa indhaha biir jilicsan oo xoog leh. Erwin wuxuu sii wadaa biyaha wabiga. Dhinaca bidix, qof ayaa ku ciyaara kataaradda. Ilaahow waa dhowyahay.
Naag midab madow leh oo leh kabtuusyo midab leh ayaa cabbaya iyadoo qabow. Waxay ku wada duulaan xiddigaha, xiddigaha hoostooda, xiddigaha dhexdooda. Nolosha Titanic waxay ku soo baxeysaa daadashadeeda. Doon waraaq isku laabma ayaa si caadi ah ugu dul daadsan biyaha, si taxaddar leh ugu qulqulaya il biyo ah biyo qoyan: Bang! Dambas ayaa ka soo dhacaya kor. Eyjafjallajökull ayaa ugu dambeyntii qarxay.
Fit wuxuu isu arkaa dhinaceeda jacayl. Sida wax la xiriira, is-waafajinta mid iyo kan kaleba iyada oo loo marayo adeeg la mid ah. Wax walbana waxay ku wada habboon yihiin qaab ahaan. Beer, sigaar iyo dambas-yaal ayaa ku yaal miiska jikada ee Mr. Alki. Taasi macno ayey sameyneysaa, taasi waa mid ku habboon. Miiska jikada Mudane Alki waa qaab dhismeed. Internetka, Hinz iyo Kunz waxay ku wada jiraan buugga macluumaadka adduunka. Hinz iyo Kunz waxay kuxiran yihiin oo keliya jiritaankooda aad u wanaagsan. Internetku ma aha dhar, waa wax aan macno lahayn.
Waxbaa caato markay tahay; waa, wax intaa ka badan ma jiraan. Waxyaabaha waa wax aan shaqsiyan ahayn. Mashiinka wejiga adduunka ee wajiga ah ayaa xukuma dhulka: Internetka Waxyaabaha. Waxyaabuhu waxay u urursadaan inay sameeyaan waxyaalaha adduunka. Shaydaanku muddo dheer ayuu kulahaa adduunkiisa. Markay tahay arrimaha nolosha, qofku kama hadlayo waxyaalaha maxaa yeelay naftooda ayaa dhaqaajiya. Laakiin shey yar ayaa kaligiis is dhaqaajin kara. Taasi waa wax.
Cabbirku wuxuu noqon karaa midka saxda ah, oo ay ku jeclaadeen ilaahyo saaxiibtinimo leh. Macallin ahaan, cabir jirro ayaa xaddidaa awooda ka horreysa sanka ardayga. Ardaygu cabirku markaa waa buuxsamayaa, noloshiisa dib ayuu udhacayaa, warshaduna waxay ka dhalin kartaa koronto qufulka.
Waxaas oo dhami waa waxyaalo badan oo lagu soo kordhiyo xadka wadarta. Ma waxaas oo dhan hadda? Waxyaabaha oo dhami ugu yaraan waa kuwo si fiican loo abaabulay. Sidii la filaayay, waxa oo dhan waa inay ku dhalaalaan geeskiisa, laakiin halkaas ayey weli ku jiraan cawlan. Dabadeed wadaadkii warshadaha ahaa wuxuu hadlayaa: “Dhammaantiis way ka badan tahay isku-darka qaybaha! Waxyaabaha oo dhami way ku sii dheelman yihiin wax kasta. Waxaa ku jira waxbadan oo keliya buuggan.
Ma jiraan wax adduunka oo dhan waxyaabaha aan ahayn. Koobku waa kursi aan fadhi ahayn. Dharku waa daruur aan daruur lahayn. Ma aha in lagu xuso eeyga: eeygu waa bisad aan badneyn sida shimbiraha. Dhammaan waxyaabaha aan ahayn waxay isugu yimaadaan adduunka wax aan jirin. Qaar baa dhahaya waxba ma dhintaan ka dib markay dhintaan. Miyaad dooneysaa inaad halkaas ku noolaato waxaas oo dhan? Waxay noqon doontaa quruxsan ciriiri qolka kaydinta wax aan jirin.
Farxad ayaa u baahan wax ka badan waxa loo baahan yahay. Marka raaxadu waxay la xiriirtaa farxadda. Laakiin in kasta oo farxaddu tahay hadiyadda nolosha, raaxeysiga ayaa si aan macquul ahayn loogu raaxeystaa. Farxad iyo raynrayn ayaa jirta. Ku raaxeysiga raaxada ayaa ku raaxaysta raaxoteeda. Farxad waa rayn rayn laga gudbay. Farxad maleh, raaxeysashadu waa mid aad gaagaaban taas. Haddii xiidmaha ay qodaan wax ka badan inta ay u baahan yihiin, markaa waa faraxsan yahay. Raaxo-macaanku waa macaan, laakiin sonkortu waa farxad.